09/16/12 ~ Myanmar Forward
မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့် နောက်ကြောင်းရာဇ၀င် (၁)
Posted by drmyochit Sunday, September 16, 2012, under ဆောင်းပါး | No comments
From : Arakan review
မြန်မာနိုင်ငံကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေတွေကို သတင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာ ကြောက်မက်ဖွယ် ရာလုပ်ကြံဖန်တီးဖော်ပြထားတာတွေကို တွေ့လိုက်ရတော့ ကျွန်တော့်မှာ တော်တော်ကို စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ်။ လူတော်တော်များများက မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကို တော်တော်သိလာကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ.ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်နဲ့ အမှန်တရားကိုတော့ မသိကြပါဘူး။ ကျွန်တော်ဒီဆောင်းပါးကိုရေးတာမြန်မာပြည် အနောက်ပိုင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်ရဲ့ တကယ့် အကြောင်းအရင်းတွေနဲ့ အမှန်တရားကို ရှင်းပြချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးဟာလည်း အဲဒီဒေသရဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ တကယ့်အတွေ့အကြုံတွေအပေါ်မှာ အခြေခံထားပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(လွန်ခဲ့တဲ့ရှစ်လတုန်းက) အဲဒီနေရာကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ___________________________________________________________________
ရခိုင် - (Rakhaing ဟု အသံထွက်သည်) Arakan ဟုလည်း ခေါ်ကြခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာ စကားနဲ့ လူမျိုးနွယ်ဖွဲ့တည်မှုရှိပြီး ကိုယ်ပိုင်ဇာတိမြေတွင်သမိုင်းအစဉ်အဆက် နေထိုင်ပေါက်ပွားလာခဲ့ရာ ထိုဒေသရှိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုးများ ဖြစ်သည်။
ရိုဟင်ဂျာ - များမကြာမီကပင် နိုင်ငံကူးပြောင်းဝင်လာပြီး သူတို့ကို အရင်တုန်းက ဘင်္ဂါလီမူဆလင် (သို့) စစ်တကောင်း မူဆလင်များဟုခေါ်သည်။ (သူတို့၏ ဇာတိဇာစ်မြစ်ကို ညွှန်ပြထားပြီးသားဖြစ်သည်။)
ရခိုင်ပြည်နယ် - မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂါလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ နှစ်ခုကြားရှိ ပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ မြို့တော်မှာ စစ်တွေဖြစ်သည်။ ယခင်က Akyab ဟုခေါ်သည်။ အကြီးဆုံးသော သမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းAကျဆုံးနေရာမှာ (မြောက်ဦးမြို့)ဖြစ်ပြီး (၁၄၃၀ မှ ၁၇၈၄)ခုနှစ်အထိ ယခင်ကရခိုင်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်က အာရှတိုက်တွင် အချမ်း သာဆုံးမြို့တော်များထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် - ၁၉၇၁ ခုနှစ်က ဖြစ်ပေါ်လာသော နိုင်ငံအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မူလAစက ရှေးခေတ်က အိန္ဒိယလူမျိုး ဟိန္ဒူ (သို့) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မင်းဆက်အမျိုးမျိုး နန်းစိုက်စိုးစံခဲ့သော ဒေသ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မူဆလင်ဘာသာဝင်တို့ စစ်နိုင်၍ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုသယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှ ပိုင်Aိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ပိုင်နက်နယ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီး၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် အရှေ့ပါကစ္စတန်အဖြစ် အနောက်ပါကစ္စတန်နှင့် နယ်နိမိတ်မိုင်တစ်ထောင်ကျော် တွဲဆက်လျက် လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပြီး ၁၉၇၁ တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအမည်ဖြင့် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ____________________________________________________________
တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးရာယU်ကျေးမှုကျနစွာ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့မွေးရပ်ဇာတိပြည်နယ်ကြီးကို ရက်စက်လှတဲ့ အစီအစဉ်တွေချပြီး တခြားလူမျိုးနဲ့ ဘာသာတရားမမျှတမှု ရပ်တည်ရန် ခွင့်ပြုမှုမရှိဘဲ အစ္စလမ်ပြည်နယ်အဖြစ် အတင်းအဓမ္မ သိမ်းယူထူထောင်လိုက်ခြင်းပါပဲ။ ဤအဖြစ်မျိုးက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာပြည်နယ်ခြားမှာရှိတဲ့ မောင်းတောနဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့တွေမှာ ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ တခြားနယ်မြေနိုင်ငံဒေသတွေကိုဘယ်တော့မှကူးသွားပြီး နယ်ချဲ့လေ့မရှိခဲ့ပါ။ ရခိုင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ရှေးကျလှတဲ့မွေးရပ်ဇာတိမြေမှာသာ အစဉ်အဆက်နေထိုင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော်လောက်ကပင်ဘင်္ဂါလီတို့ရဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့အတင်း အဓမ္မမီးရှို.ခြင်းတွေကို ရွာပေါင်းများစွာ ခံခဲ့ရဘူးပါတယ်။
ရခိုင်တို့ဟာ မူဆလင်ဘင်္ဂါလီတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအပေါ် မငဲ့ကွက်ဘဲ ဗုဒ္ဓဘုရားများ ဘုန်းကြီးကျောင်းများနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရေးဆိုင်ရာ နေရာများကို ဖျက်ဆီးဦးမှာကို ခါးသည်းလှတဲ့ ယခင်အတွေ့အကြုံအရ သိနေခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပြန်လေပြီရော။
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း မှာ (လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် အနည်းငယ်တုန်းက) ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများအပါအ၀င် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူပေါင်း ၅၀၀၀ ခန်.ကို လွဲမှားသော အယူနဲ့သတ်ဖြတ်ချင်စိတ်ပြင်းပြနေတဲ့ မူဆလင်တို့က ခေါင်းဖြတ် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဦးရေနည်းသွားပြီးတော့၊ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကို လွတ်လပ်သော အစ္စလာမ်ပြည်နယ် အဖြစ် ပြောင်းပစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း မှာလည်း ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူတို့ကို အစဉ်မပြတ်ပြန်ပေးဆွဲခြင်း၊ ခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ခြင်းတွေ ဆက်လုပ်ပြီး သီးခြားအစ္စလာမ် သီးသန့်နိုင်ငံဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက မူဆလင်မရှိသော အပိုင်းတွေမှာလဲ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး၊ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်ကျောင်းသူကလေးများ ကျောင်းတက်ဖို့လမ်းလျှောက်လာရာမှာ ခေါင်းတွေဖြတ်ပြီး သတ်ခဲ့ကြတယ်။ မကြာသေးခင်က မူဆလင်ခေါင်းဆောင်တွေက မြန်မာနိုင်ငံကို ဘာသာရေးစစ်ပွဲလုပ်ရန် ပါဝင်ပေးဆပ်ကြဖို့ အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးများကို ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ လောက်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထဲမှာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်၂၈% ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဟိန္ဒူလူထုကို အတင်းမောင်းထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟိန္ဒူဦးရေဟာ ၉% တောင်မရှိတော့ဘဲနည်းလာပါတော့တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဦးရေအနည်းစုကို ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် မူဆလင်များကဆက်ဆံကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓစေတီတော်များ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများနဲ့ အိမ်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးကြပါတယ်။ ရှေးဟောင်းဘုရားတွေ၊ တရားထိုင်တဲ့ဂူတွေနဲ့ ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အရာတွေဟာ ဗုဒ္ဓခေတ် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကတည်းကဖြစ်ပြီး ယခုတော့ လုံးဝ ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါပြီ။
ရခိုင်ဒေသမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၂၀၀၀ ကျော်အစောပိုင်း အေဒီရာစုနှစ်များကပင်ထီးနန်း၊ ဘုရင်များနဲ့ သမိုင်းကောင်းအစဉ်အလာများ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့နဲ့ ဘုရားကျောင်းများကို ဖျက်ဆီးခံခဲ့ကြရတာကတော့ မြောက်ဦးမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးစစ်စစ်တို့ရဲ့ သက်သေပြုရာ ရခိုင်စိတ်ဓာတ်ရှိရာ အချက်အခြာမြို့တစ်မြို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်တို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ခေတ်ကိုတော့ ဖယ်လိုက်ပါတော့။ အင်္ဂလိပ်တို့ဘာမှမသိရှာဘဲအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကို ကူညီဖန်တီးပေးသလို ဖြစ်ခဲ့တယ်။
အင်္ဂလိပ်တို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံနှင့် အခြားနိုင်ငံတွေကို ၀င်ရောက်စဉ်က စိုက်ပျိုး ရေးနှင့်စီးပွားလုပ်ငန်းတွေမှာကူလုပ်တဲ့လူတွေအဖြစ် ခိုင်းဖို့ တရုတ်တွေ၊ ကုလားတွေကို ခေါ်သွင်းခဲ့ကြတယ်။ အင်္ဂလိပ် တွေဟာ ဘင်္ဂလားက မူဆလင်ကုလားတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကို ခေါ်သွင်းတာများတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘင်္ဂလား(ဘင်္ဂဒေ့ရှ်)ကနီးလည်းနီးတော့အဆင်ပြေတယ်။ အဲဒီအလုပ်ကူသူ ဘင်္ဂါလီ မန်နေဂျာများက ဌာနေခံရခိုင်လုပ်သားတွေကို ငှားရမယ့်အစား ထောင်ပေါင်းးများစွာသော မူဆလင် ဘင်္ဂါလီများကို လာပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခေါ်ယူခဲ့ကြတယ်။
အဲဒီအချိန်တုန်းက (၁၈၀၀ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်း) ဘင်္ဂလားမှာ ဒီဘင်္ဂါလီတွေ တော်တော်များများဟာ အာရေးဘီး ယားရဲ့ဝါဟာဗစ်အတွေးအခေါ်များကိုအခြေခံတဲ့ အစ္စလာမ်မစ်ဖာရာဒိုင်းလုပ်ရှားမှုရဲ့ အရှိန်အဟုန်အောက်မှာ လွမ်းမိုးခြင်းခံနေရတယ်။ ဒီအာရေးဘီးယားရဲ့ ဝါဟာဗစ် အတွေးအခေါ်နဲ့ ဆော်ဒီ မျိုးနွယ်စုတွေက သူတို့ကိုသူတို့ အာရေးဘီးယားဆိုတဲ့ နာမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်၊ အသေးစိတ်အနေနဲ ဘင်္ဂါလီတွေကို ညွှန်ကြားထားတာကလည်း “ရေအရင်းအမြစ်တွေ့လျှင်သူတို့ရဲ့ မူဆလင်ဘာသာဝင်တစ်မျိုးချည်းသာနေရမယ့်ရွာတွေကိုတည်ကြဖို့ဖြစ်တယ်”။
ဒါ့ကြောင့်လည်းသူတို့ဘင်္ဂါလီတွေဟာ နောက်ပိုင်းမှာရေပြင်ကိုနိုင်နင်းလာပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုငြင်းပယ်လာတော့တယ်။ သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်က သူတို့တတွေအင်အားတောင့်တင်းပြီး အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု ယူဆတဲ့အခါ ဘာသာရေးစစ်ဆင်နွဲဖို့ ပြင်ဆင်ကြရန် ညွှန်ကြားခဲ့ကြတယ်။
၁၉၁၀ ၀န်းကျင်လောက်က အလုပ်ကူ မူဆလင်မန်နေဂျာ ၁၅ ယောက်ဟာ မောင်းတောမြို့တစ်မြို့တည်းသို့ ထောင်နှင့်ချီတဲ့ ဘင်္ဂါလီအလုပ်သမားများကို ခေါ်သွင်းခဲ့ကြတယ်။ အစပိုင်းမှာ ကြီးမားတဲ့ လူဦးရေတိုးပွားမှု စတင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဆန့်ကျင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုများ စတင်ခဲ့တယ်။
၁၉၃၉ ခုနှစ်မှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ မူဆလင်ဘင်္ဂါလီကုလားများရဲ့ လူဦးရေ အလျင်အမြန်တိုးပွားနေမှုကို စုံစမ်း စစ်ဆေးရန် ကော်မရှင်တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ စုံစမ်းချက်တွေအရ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၁၈၂၅ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၃၀၀၀၀ လောက်ရှိရာမှ ၁၉၃၀ ခုနှစ်မှာ လူဦးရေ ၂၂၀၀၀၀ ကျော်လောက်အထိ တိုးပွားလာခဲ့တယ်။
အဲဒီ ကော်မရှင်က ကောက်ချက်ချပုံများအရ အားမလျော့စတမ်း ဆက်တိုက်နယ်ခြားနေရာမှာလုပ်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်လှုပ်ရှားမှုကို ရပ်တန်းကရပ်မပစ်လျှင် (သို့) ထိန်းချုပ်မှုမရှိလျှင် မကြာမီအချိန်အတွင်း အဓိကရုန်း အကြီးအကျယ်ဖြစ်လိမ့်မည်လို. ဖြစ်တယ်။ ကော်မရှင်ရဲ. တွက်ဆချက်ကလည်း မှန်နေခဲ့တယ်။
၁၉၄၂ အစောပိုင်းမှာ ဂျပန်တွေဟာရခိုင်ဘက်သို့ ခြေဦးလှည့်လာတဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်တို့က“ဘင်္ဂါလီဗီဖို့စ်”လို့ခေါ်တဲ့ မူဆလင်တပ်သားအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ ပြီးတော့လက်နက်တွေလည်း သူတို့ကို တပ်ဆင်ပေးခဲ့တယ်။ အင်္ဂလိပ်တွေက ဒီဘင်္ဂါလီတွေကို ရခိုင်တွေထက် တိုက်ရေးခိုက်ရေးမှာ လက်ရဲဇက်ရဲတဲ့ သူတွေအဖြစ် မြင်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရုတ်တရက်ဆုတ်ခွာရတဲ့အချိန်မှာတော့ဘင်္ဂါလီတွေဟာသူတို့ကိုပေးထားတဲ့လက်နက်တွေကို အလျင်အမြန်သုံးပစ်ခဲ့ကြတယ်။ ဘယ်မှာသုံးပစ်ကြလဲဆိုရင်တော့ ဂျပန်တွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ဘဲထောင်ပေါင်း များစွာသော ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို သတ်ပစ်ဖို့အတွက် သုံးခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်းတော ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရွာတွေ၊ ဘုရားစေတီကျောင်းကန်တွေနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို မီးရှို့ပစ်ခဲ့ကြတယ်။
ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာပေါင်း ၃၀၀၀၀ လောက်ဟာ ဒီတကယ့် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမှာ အသတ်ခံခဲ့ရပြီး သောင်းနဲ့ချီတဲ့ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဘိုးဘွားပိုင်မြေတွေကနေ လူမျိုးပြုတ်သကဲ့သို့ စွန့်ခွာခဲ့ရတယ်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းမှာတော့ ဘူးသီးတောင် မောင်းတောဒေသတစ်နေရာလုံးဟာ ဂျပန်တွေ၊ အင်္ဂလိပ်တွေကျန်ခဲ့တဲ့ လက်နက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံပြီးအင်အားတောင့်တင်းနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေရဲ့လက်ထဲမှာခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ ရောက်ရှိလို့နေခဲ့တယ်။သူတို့တွေဟာ နယ်ခြားဒေသကို ချုပ်ကိုင်နိုင်ပြီဆိုတော့ မူဆလင်တွေရဲ့ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ လှုပ်ရှားမှုများဟာ ကြီးမားစွာတိုးတက်လာခဲ့တယ်။
ဒီနေရာတွေကတော့ ဟိုးအရင် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာထဲက လုံးဝနီးပါး ဗုဒ္ဓဘာသာချည်းဘဲ နေလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ရုတ်တရက် အတော်တိုတောင်းတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ တော်တော်ကြီး ကင်းစင်သွားပြီး လုံးဝနီးပါးမူဆလင်တွေသာရှိခဲ့ပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ နယ်မြေချဲ့ဖို့ စီမံကိန်းတွေချပြီး အဲဒီနယ်မြေတွေကို လုံးဝ မူဆလင်ချည်းသာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။
၁၉၄၂ ခုနှစ်တုန်းက အင်္ဂလိပ်အရာရှိတစ်ဦးရဲ့ မှတ်တမ်းပြုစုမှုတစ်ရပ်ထဲမှာ…“ဘူးသီးတောင်နဲ့ အနီးတ၀ိုက်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ ရွာတွေမှာရှိတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ ရက်စက်စွာ အတုံးလိုက်အတစ်လိုက် နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံကြရတဲ့အကြောင်းတွေကို ကျွန်တော့်ကိုပြောပြကြပါတယ်။ မြောက်ဦးရဲ့အနောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ ရွာအများစုကို လည်း ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တပ်က ဖျက်ဆီးကြတာတွေလည်း ပါပါတယ်။ “တကယ်တော့ ရန်သူ့ဂျပန်တပ်ဟာ ဒီရွာတွေနားကို တစ်ခါမျှ ရောက်မလာခဲ့ပါဘူး” ရာပေါင်းများစွာသော ရခိုင်ရွာသားတွေဟာ တောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေပေါ်မှာ ပုန်းအောင်းနေခဲ့ကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် နေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ မွေးရပ်မြေကနေ ပြေးခဲ့ကြရတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ အဲဒီက မူဆလင်တွေကို နိုင်အောင်ပြန်မတိုက်ထုတ်နိုင်ရန်တော့ သူတို့ဘ၀ဟာ ကယ်တင်နိုင်မဲ့လမ်း မရှိနိုင်တော့ပါဘူး” လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
ဂျပန်တွေကို မောင်းထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်တွင် အဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တစ်ဦးဖြစ်သော ဗိုလ်ရန်အောင် ဟာ စစ်တွေဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုများကို ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ ဆူပူသောင်းကျန်းသတ်ဖြတ်မှုများကို တားဆီးဖို့ အတွက် ရခိုင်ဒေသကို လွှတ်ခြင်းခံရတယ်။ သူဟာ သူ့ရဲ့ ရဲဘော်ကောင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ရန်နောင်နဲ့ ဗိုလ်မျိုးညွန့်တို့ကို မောင်းတောကို မူဆလင်ခေါင်းဆောင်များနှင့် သဘောတူဆွေးနွေးဖို့ လွှတ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့မူဆလင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့  ဆွေးနွေးစကားပြောမယ့်အစား နှစ်ယောက်စလုံးကို သတ်ပစ်ခဲ့ပါ တယ်။
သူတို့တွေဟာဒီနယ်မြေတွေကို သူတို့ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေအဖြစ်လိုချင်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့“ဒါရူအစ္စလမ်”လို့ခေါ်တဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ပေါင်းစည်းသွားမယ့်အစ္စလမ်နိုင်ငံကိုတည်ထောင်ချင်ခဲ့တယ်။ မူဆလင်တွေဟာနေရာအနှံ့ရှိအခြားမူဆလင်မဟုတ်သူများကို အပြတ်ရှင်းခဲ့တာနဲ့အမျှ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လုံးဝ အစ္စလမ်ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်အောင် ဖန်တီး လာခဲ့တယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ဘာအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကို တကယ်သိမြင်လာရပါပြီ။ အကယ်၍ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ ဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အသက်တွေ၊ သူတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေ၊ဘိုးဘွားပိုင်မြေတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ သမိုင်းဟာ လုံးဝ ပျောက်ဆုံးပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ် ဆိုတာကို မြင်လာခဲ့တယ်။
ကိုရမ် ၃၃း၂၇ “And, He made you heirs to their land and their dwellings and their property, and (to)aland which you have not yet trodden, and Allah has power over all things.”
ကိုရမ် ၂၁း၄၄ “Do they see Us advancing, gradually reducing the land (in their control), curtailing (reducing) its borders on all sides? It is they who will be overcome.”
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတော့အင်္ဂလိပ်တွေဟာ ပြန်ဝင်လာပြီး ချုပ်ကိုင်ခဲ့ပြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မူဆလင်တွေဟာ သူတို့မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ပြန်လာပြီး မွေးရပ်ရွာတွေမှာ ပြန်နေဖို့ကို လက်မခံခဲ့ဘူး။ သူတို့တွေဟာ အခုချိန်မှာ သူတို့မှာ “ရှာရီးယားဥပဒေ”နဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်မူဆလင်ချည်း သီးသန့်နယ်မြေရှိနေပြီလို့ ယုံကြည်နေကြတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့တွေဟာ မူဆလင်မဟုတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေ သို့မဟုတ် ဗမာတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို လက်မခံခဲ့ဘူး။ ဒီလိုလက်ခံမယ့်အစား နောင်မကြာမီ အစ္စလာမ်နိုင်ငံ ဖြစ်တော့မယ့် ပါကစ္စတန်ထဲကို ပူးပေါင်းဝင်ရောက်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့တယ်။
အင်္ဂလိပ်တွေက ဗမာတွေကို လွတ်လပ်ရေးပေးဖို့ ပြင်ဆင်လာတဲ့အခါမှာတော့ “ဂျာမီအာတူလ်အယ်လီမာအီအစ္စလာမ်ပါတီ”လို့အမည်ရတဲ့ မူဆလင်ခေါင်းဆောင်များ အဖွဲ့ဟာ မကြာမီဖြစ်ပေါ်တော့မယ့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှ မူဆလင်ခေါင်းဆောင်များနဲ့ ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး သူပုန်တပ်ဖွဲ့တစ်ခု ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ အဲဒီသူပုန်တပ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရတဲ့အကြောင်းကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သိမ်းယူပြီး ပါကစ္စတန်အရှေ့ပိုင်း (ယခု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်) နဲ့ ပူးပေါင်းဖို့ဖြစ်တယ်။
၁၉၄၆ မှာတော့ သူတို့တွေဟာ “မူဆလင်များလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့အစည်း” (အမ်အယ်လ်အို)ကို ဖွဲ့စည်းပြီး သူတို့ရဲ့ စစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၄၈ မှာ သူတို့တွေဟာပါတီရဲ့  နာမည်ကို မူဂျာဟစ်ပါတီလို့ပြောင်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ “မူဂျာဟစ်သူပုန်”အဖွဲ့အဖြစ်သိလာရတယ်။ မူဂျာဟေဒင်ဆိုတာကတော့ အစ္စလမ်ဘာသာရေးစစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲမဲ့ မူဆလင်တိုက်ခိုက်ရေးသမားများလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။) ဂျီဟတ် = အစ္စလမ်ဘာသာ၏ ဘာသာရေးစစ်
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ မင်းကြီးကသူ့ရဲ့လက်အောက်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် မူဆလင် များရဲ့ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်မှုကို ခံရတဲ့အခါသတင်းမှတ်တမ်းတစ်ပုဒ်ကိုရေးခဲ့တယ်။
အဆိုပါသတင်းမှတ်တမ်းမှာ သူရေးထားတာကတော့ “လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်တဲ့ လူတွေဟာ မူဆလင်ရဲတပ်ဖွဲ့က ခိုင်းစေထားတာ”လို့ သံသယ ရှိခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီလူတွေမှာ ပြင်းထန်တဲ့ မူဆလင်စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဒီနယ်မြေတစ်ခုလုံးကို နှိပ်ပစ်မယ်၊ အနိုင်ယူမယ်ဆို တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေခဲ့တယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ ဗမာအစိုးရရဲ့ ဥပဒေအရ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်းတောဒေသမှာရှိတဲ့ မူဆလင်ထုက တိုက်ရိုက်ရန်စပျိုး စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်အသွင် ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ ဒီလိုအစိုးရအပေါ် အလွန် အကောက်အကြံများပြီး ဥပဒေ မလေးစားမှုတွေကို ဗမာအစိုးရက ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် အရေးတယူ မတုန့်ပြန်၊ မဆက်ဆံ ဘူးဆိုရင် ဒီပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ မူဆလင်အဖွဲ့အစည်းထုကြီးက ဒီဒေသကို ဖြစ်ခါစပါကစ္စတန်နဲ့ပေါင်းစည်းဖို့ ကြိုးစားရလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ဇန်န၀ါရီလ(၄)ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါ ဒီမူဆလင်တွေ အတွက်မဟုတ်ပြန်ပါဘူးလေ။ ဒီတော့သူတို့မှာ အစီအစU်တွေရှိခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ဇန်န၀ါရီလ(၉) ရက်နေ့မှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအသစ်ထံ မူဂျာဟစ်ပါတီကစာတစ်စောင်ပို့ပါတယ်။အဲဒီစာမှာတောင်းဆိုထားတဲ့ စာရင်းထဲမှာပါတာတွေကတော့--
(၁) ကုလားတန်မြစ်နဲ့နတ်မြစ်ကြားမှာရှိတဲ့နယ်မြေဧရိယာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မူဆလင် အမျိုးသားကိုယ်ပိုင်မြေဌာနေအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရမည်။ (အဲဒီဒေသမှာ သူတို့တွေကလွန်ခဲ့ သော၆နှစ်ကပင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအမြစ်ပြတ်ကင်းမဲ့အောင်ရှင်းလင်းထားပြီးဟုဆိုတယ်)
(၂) မူဂျာဟစ်ပါတီကိုဗမာအစိုးရအသစ်မှာတရားဝင်အဆင့်အတန်းဝင်ရေးအတွက် ဗမာ့အစိုးရသစ်ရဲ့ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပေးရမည်။
(၃) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များစွာကို သတ်ဖြတ်မှု၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ စေတီပုထိုးများနှင့် ကျေးရွာကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု များကြောင့် ဖမ်းဆီးပြီးအကျဉ်းချခံထားရသော မူဂျာဟေဒင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူများကို ခြွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးရမည်။”တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ဗမာနိုင်ငံဗဟိုအစိုးရသစ်မှာလဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလုပ်ကြံခံရခြင်းအတွက်မနည်းအဖတ်ဆယ်နေရတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီရာဇသံပြင်းပြင်းတောင်းဆိုချက်တွေ ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ မြောက်ဖက် ရခိုင်ပြည်နယ်က မူဆလင်တွေကချက်ခြင်း အမြန်ပဲ ဗမာနိုင်ငံကို ဂျီဟတ်လိုခေါ်တဲ. ဘာသာရေးစစ်ကြေငြာလိုက်ပါတော့တယ်။
မူဂျာဟေဒင်တွေမှာအတွင်းစိတ်ယုတ်ကန်းလှတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီးမောင်းတောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကျေးရွာများအားလုံးကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ (၄င်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာလွန်ခဲ့သော၆နှစ်ကပင်ဖျက်ဆီးသုတ်သင်ပြီး ဖြစ်တယ်။)
၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ (အာဇာနည်နေ့)မှာ ငပြုချောင်းနှင့် အနီးတ၀ိုက်မှာရှိတဲ့ ရွာတွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြ တယ်။ ပြီးတော့ နည်းလမ်းအသစ်အနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများကို ပြန်ပေးဆွဲခဲကြတယ်။ သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ ငွေ(သို့) သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ အနေအထား၊ မရလျှင် ပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။
၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုမှ မှားယွင်းစွာ ပြဿနာကို မီးမွှေးခဲ့မိပုံ
၁၉၅၀,၁၉၆၀,၁၉၇၀ခုနှစ်များမှာ မြန်မာပြည်ဟာနိုင်ငံရေးရှုပ်ထွေးမှုတွေ၊ အချင်းချင်းအချင်းများတိုက်ခိုက်မှုတွေ၊ ကွန်မြူနစ်သူပုန်ထမှုတွေ၊ရောင်စုံသူပုန်တွေနဲ့ရှုပ်ယှက်ခတ်ပြီးရှင်းမရလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ်။(ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့ ၁၉၄၇ခု နောက်ပိုင်းမှာဗိုလ်နေ၀င်းက အသာစီးရနေရာယူလာခဲ့တယ်)
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဟာ လုံးဝပြိုလဲသွားမဲ့ အန္တရာယ်ကနေ ထိန်းချုပ်မှုရလာခဲ့စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ဦးနုအတွက်တော့ ကြိုးတန်းပေါ်လျှောက်ရသလို အသည်းအသန်အခြေအနေ ရောက်ခဲ့တယ်။ ဦးနုကို လွှတ်တော်မှာ အယုံအကြည်မရှိအဆိုကို တင်သွင်းပြီး သူ့အာဏာကို ခွာချဖို့ ထုတ်ပြန်စာထွက်ခဲ့တယ်။
သူဆက်လက်ရှင်သန် ရပ်တည်နိုင်ဖို့ သူရနိုင်သမျှအကူအညီတွေလိုနေပြီလေ။ ဦးနုဟာ ပါလီမန်မှာ ရခိုင်လွှတ်တော်အမတ်တွေကို အားကိုးလို့ မရခဲ့ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရခိုင်လူမျိုးတွေက ဦးနုကို မထောက်ခံဘဲ ဆန့်ကျင်ကြလို့ပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက လွှတ်တော်မှာ မူဆလင်တချို့ရှိတယ်။ ဦးနုဟာ သူ့ကို ယုံကြည်ပြီး ထောက်ခံမဲရဖို့ အဲဒီမူဆလင်တွေ အတွက် ဘာမဆို သူလုပ်နိုင်သမျှ အကူအညီပေးချင်နေတယ်။
၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ ဦးနုရဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းကွက်ကြည့်တတ်တဲ့ အစိုးရဟာ ထောက်ခံမဲပွတ်ခါသီခါနဲ့ အနိုင်ရ ရှင်သန်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့် သူနိုင်ခဲ့သလဲဆိုတော့ သူက မူဆလင်တွေ၊ မွန်လူမျိုးတွေနဲ့ တခြားမဲအချို့ကို ရလိုက်လို့ပါပဲ။
သူဒီမဲတွေရဖို့  မွန်တို့ကို မြန်မာပြည်ရဲ့ အရှေ့ပိုင်းမှာ မွန်ပြည်နယ်တွေ ဖန်တီးပေးမယ်၊ မြန်မာပြည်ရဲ့အနောက်ပိုင်းမှာတော့ မူဆလင်ပြည်နယ် တွေတည်ထောင်စေမယ်၊ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်မှာ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်များကို နိုင်ငံသားပြုခွင့်ပြုမယ်လို့ ကတိပေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ (အဲဒီအချိန်တုန်းက ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးကို လူလည်း မသိ၊ အသုံးလဲ မပြုခဲ့ကြပါ)
၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၃၁)ရက်နေ့မှာ ဦးနုက မူဂျာဟစ်သူပုန်အားလုံးကို လက်နက်ချကြပါလျှင် အခွင့်အရေးပေး မည်လို့ ကမ်းလှမ်းမှု လုပ်ခဲ့တယ်။ တချို့မူဂျာဟစ်တွေက လက်နက်ချကြတယ်။ တချို့ကတော့ နိုင်ငံသားပြုမှုကို တောင်းဆိုကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြားအဖြစ်အပျက်တွေဟာ လျင်မြန်စွာဘဲ ဖြစ်ပျက် ခဲ့တယ်။
၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှာတော့ ဗမာတပ်မတော်က အဆင့်မြင့်စစ်အရာရှိတွေက ဦးနုရဲ့နေအိမ်ကိုသွားပြီး စစ်တပ်နဲ့ဆန့်ကျင်မှာလား သို့မဟုတ် အာဏာစွန့်လွှတ်ပြီး စစ်တပ်ကို အာဏာလွှဲအပ်မလားဆိုတဲ့ ရာဇသံ သတိပေးခဲ့တယ်။ (ဦးနုမှာ စစ်တပ်ကို ဆန့်ကျင်ရင် အကျဉ်းကျခံရ (သို့) အသတ်ခံရမှာဖြစ်တယ်)။ တကယ်တော့ စစ်အရာရှိများဟာ လေဆိပ်နဲ့ မြို့နယ်တွေနဲ့ ၁၀ မိုင်ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာ အဆင်သင့် တပ်စွဲထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဦးနုမှာ ရွေးချယ်စရာ မရှိလေပြီ။ သူ့မှာ အာဏာလည်း မရှိတော့ပြီမို့ သူ့ရဲ့ပြည်နယ်ပြုပေးရေး၊ နိုင်ငံသားပြုပေးရေး တွေလည်း ကင်းဝေးပျောက်ကွယ်ပြီပေါ့။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းဦးဆောင်တဲ့ စစ်တပ် အိမ်စောင့်အစိုးရက အာဏာသိမ်းယူခဲ့ ပြီး (၂)နှစ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပပေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တယ်။
၁၉၆၀ ခုနှစ်မှာ ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်း တကယ်တော့ ဦးနုကို အာဏာပြန်ပေးဖို့ ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဦးနုက သူ့ကို အမြန်မဲပေးခဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ခဲ့ရပြီလေ။ ဦးနုက မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ မြန်မာ့ရေဒီယို (Voice of Burma) ကနေ ပုံမှန်အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ ဘင်္ဂလီဘာသာစကားနဲ့ အသံလွင်မှုကို အတင်းလုပ်စေပြီး သူ့ကို အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ မူဆလင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို တစ်စိတ်တစ်ဒေသကြေနပ်အောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘင်္ဂါလီတွေဟာပို၍ပို၍လိုချင်လာကြတယ်။ ထောင်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေက မြန်မာလူမျိုး မှတ်ပုံတင်ကဒ်ရရှိလိုကြောင်း တောင်းဆိုကြတယ်။ မူဆလင်ဘာသာဝင်သူတွေကသာ ထိန်းချုပ်ရမဲ့ အထူးနယ်ခြား နယ်မြေ မောင်းတောမြို့ကို ဦးနုက ထူထောင်တာပဲဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ကြက်ခြံကို မြေခွေးအစောင့်ချခိုင်းသလို၊ ယခုလို နယ်ခြားဒေသကို မူလဆင်များက ထိန်းချုပ်လာနိုင်စေဖို့ပေါ့။
ယခုအခါမှာ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်ခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့ရဲ့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေကို မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ကချင်၊ မွန်၊ ပအို့၊ ချင်း၊ ပလောင်စတဲ့ ဇာတိမြေမှာ မွေးတဲ့ဌာနေခံ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးနွယ်စုတွေလို့ သတ်မှတ်ပြီး အသိအမှတ်ပြုခံရ စေဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ ဒါမှသာနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ပြုခြင်းအတွက် တရားဝင်မယ်လေ။
ယနေ့ခေတ်မှာ ဘင်္ဂါလီမူဆလင် (သို့) စစ်တကောင်းမူဆလင် အသုံးအနှုံးတွေကို သုံးရမဲ့အစား ရေဘုယျအနေမျိုးနဲ့ “ရခိုင်မူဆလင်များ”လို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလာခဲ့ပြီး၊လူတွေနားလည်မှုလွဲအောင် ဆွယ်ယူပြီး ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးက သူတို့ကို ရခိုင်မှတ်တမ်းဝင် အသိမှတ်ပြုတစ်ရပ်အဖြစ် ယုံလာစေဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ်။
ဒီမှာ ထင်ရှားနေတဲ့ ပြဿနာ ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ တခြားတခြားသော တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုဖြစ်ခြင်းတွေမှာ နက်ရှိုင်းတဲ့ ဇစ်မြစ်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဇာတိမြေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းရှည်ဆိုတာရှိစမြဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရခိုင်မူဆလင်လို့ဆိုတာတွေ မရှိကြပါဘူး။
သူတို့တတွေဟာ တစ်ဖက်နိုင်ငံကို ပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့ လူလှိုင်းကြီးတွေထဲက ပေါက်ပွားလာခဲ့ကြပြီး၊ သူတို့လူမျိုးတွေဟာ ရောက်တဲ့နေရာမှာ ရှိတဲ့သူတွေကို တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ကြပြီး ဌာနေခံဇာတိမြေက လူတွေဆီက ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ မြေယာတွေကိုလုယူခဲ့ကြတယ်။
ပြီးတော့သူတို့မှာ အစ္စလာမ်ချည်း သီးသန့်ရှိတဲ့ ပြည်နယ်က သူတို့ရဲ့ မူဆလင်လူမျိုးတွေအတွက် ဆွေးနွေးပြောဆိုစရာတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုအနေနဲ့ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာနိုင် စရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံ ဇာတိမြေက တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရေးအတွက် သူတို့ရဲ့ တောင်းဆိုချက်ဟာ ပယ်ချခံခဲ့ရတယ်လေ။ ဤကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်မှာ ဇာတိချက်ကြွေဌာနေခံ ရခိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းလည်း ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်သလို၊ မကြာသေးခင်ကမှ မျိုးဆက်တစ်ဆက် (သို့) နှစ်ဆက်မျှ ပြောင်းရွေ့ဝင်လာကြတဲ့ သူတို့တတွေဟာ ဤမြန်မာမြေမှာ အခြေချနေကြရုံနဲ့လည်း မြန်မာ့တိုင်းရင်းသား လူမျိုးနွယ်စု တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တာကို လုံးဝရှင်းပါတယ်။
အဲဒီမှာ “ရခိုင်မူဆလင်”ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်အသုံးအနှုန်းကိုအကောက်ဉာဏ်ဆင် တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ.သုံးခဲ့ပေမဲ့လည်း မအောင်မြင်ခဲ့တော့ အခု “ရိုဟင်ဂျာ” အခေါ်အဝေါ်ကို စတင်သုံးကြပြန်လေပြီကော။ ဦးနုကအာဏာရရှိရေးအတွက်တစ်ကြိမ် ကြိုးစားခဲ့တာရော၊သူပြုခဲ့တဲ့ ကတိက၀တ်တွေရော၊ သူကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် မအောင်မြင်လာတော့ မဖြည့်စွမ်းနိုင်ခဲ့ပါချေ။
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက ဤအခြေအနေကို အကြောင်းပြလျက် စင်ပေါ်ကို စစ်တပ်အောင်ပွဲတင်ပြီး အာဏာကို သိမ်းယူခဲ့တယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖြုတ်ချပြီး၊ မြန်မာရေဒီယိုအစီအစU်မှာ ဘင်္ဂါလီဘာသာနဲ့ မွန်ဘာသာနဲ့ ထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုပါ ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ဦးနုကိုလည်း ထောင်သွင်းအကျU်းချခဲ့ပါတယ်။
ဒီ့နောက် “ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုတဲ့ အမည်လဲ (၁၀)နှစ်လောက် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။
“ရိုဟင်ဂျာ”တို့၏ လုပ်ကြံတီထွင်မှုနှင့် သမိုင်းကြောင်း အထောက်အထားကို ဉာဏ်ဆင်လှည့်ဖြားရေးသားမှုများ
၁၉၅၀ ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ “ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ဟာပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအခေါ်အဝေါ်ဟာ ဒေသတ၀ိုက်ကို စတင်ပျံ့နှံ့လာပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဘင်္ဂါလီမူဆလင် (သို့) စစ်တကောင်းမူဆလင်ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ် တွေကို အစားထိုးတဲ့ နာမည်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။
ဒါပေမဲ့ တော်တော်ကြာတဲ့အချိန်ရောက်မှ အများသိတဲ့ နာမည်တစ်ခုဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက မူဂျာဟစ်သူပုန်တွေကို နှိမ်နင်းခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ မူဆလင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ မူဆလင်တွေအတွက် ဇာတ်လမ်းအသစ်တစ်ပုဒ်လိုလာပြီဆိုတာကို သတိထားမိလာတာနဲ့အမျှ ဘ၀အသစ်အဖြစ် လက်ခံခဲ့ပြီး အခုဆိုရင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ “ရိုဟင်ဂျာ”လို့ ခေါ်နေကြပြီ။
ဒီစာလုံးအခေါ်အဝေါ်သစ်က “သတင်းမီဒီယာ နှင့် အထောက်အထား”တွေကို သေချာကိုင်တွယ်ဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူလာတယ်။ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်နဲ့ စစ်တကောင်းမူဆလင်ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေက သူတို့ဟာ ဗမာပြည်ပကလာတယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတယ်လေ။ ပြီးတော့ သူတို့တွေ ဘင်္ဂါလီ သို့မဟုတ် စစ်တကောင်းမှာ အခြေစိုက်လာခဲ့ကြတယ် ဆိုတာကိုပေါ့။
“ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုတဲ့နာမည်မှာ အခြားတူတဲ့အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အဲဒီနာမည်က သူတို့ရဲ့  “သမိုင်းသစ်”ကိုဖြန့်ဖို့ ပိုပြီးလွယ်ကူစေခဲ့တယ်။ အဲဒီ “သမိုင်းသစ်”မှာ သူတို့ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ အမှန်တကယ်ပဲ ဒီနယ်မြေတွေမှာ နေထိုင်ကျက်စားလိုတာ အလွန့်အလွန်ကြာမြင့်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဘာကြောင့် ရိုဟင်ဂျာတွေကို မုန်းရသလဲ၊ ပြီးတော့ သူတို့ကို ဘာကြောင့် မကူညီတာလဲ
၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို လွတ်လပ်ရေးပေးတော့ အိန္ဒိယအရှေ့ဘက်ခြမ်းနဲ့ အိန္ဒိယအနောက်ဘက်ခြမ်းဆိုပြီး မူဆလင်ဒေသနှစ်ပိုင်းရှိနေခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီနှစ်ပိုင်းဟာ ပူးပေါင်းထားတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ပါကစ္စတန်ရဲ့ အစ္စလာမ်နိုင်ငံ တစ်ခုအဖြစ် ပြုလုပ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ (အဲဒီမူဆလင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုတောင် ကိုယ်တိုင်ပြဿနာရှာခဲ့တယ်) နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့ကြားက တင်းမာမှုတွေပြင်းထန်လာပြီး သွေးချောင်းစီးတဲ့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော်အရှေ့ပိုင်းဟာ အင်အားကြီးတဲ့ အနောက်ပိုင်းက လွတ်လပ်ရေးရသည့်တိုင်အောင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ အရှေ့ဘက်အပိုင်းဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဆိုတဲ့ နိုင်ငံသစ်ဖြစ်လာတယ်။
ရခိုင်မှာရောက်နေတဲ့ မူဆလင်တွေက တကယ်တမ်းကြတော့ထူးခြားစွာဝေးလံတဲ့အနောက်ဘက်အပိုင်း (ပါကစ္စတန်)ကို အားပေးထောက်ခံခဲ့ပြီး နယ်မြေနီးစပ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို နည်းနည်းလေးမှ အထောက်အကူ မပြုခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့တွေဟာပိုပြီးစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်တဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကို ပိုပြီး သဘောကျနှစ်သက်လို့လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှေ်နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလူမျိုးတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ (သို့) စစ်တကောင်း မူဆလင်တွေအပေါ် ဒေါသထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့တတွေကို သူတို့နိုင်ငံသားအဖြစ်ကနေ စွန့်လွှတ်ပစ်လိုက်ပြီး သူတို့ကို သစ္စာဖောက်တွေအဖြစ် သတ်မှတ်ဆက်ဆံကြတယ်။ ယခုထက်တိုင်လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက သူတို့ကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး၊ ဖြေလည်း မဖြေပျောက်နိုင်လောက်အောင် နာကျည်းနေကြပါတယ်။ ဘယ်တော့မှလည်း သူတို့ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ပြန်ဝင်လာဖို့ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဘင်္ဂါလီ (သို့) စစ်တကောင်းမူဆလင်တွေဟာလည်း ဒီလူတွေနဲ့ လူမျိုးချင်းအတူတူပါပဲ။ ဒီနေရာကပဲလာပြီး ဘာသာစကားချင်းလည်း အတူတူပါပဲ။ မျိုးနွယ်စုချင်းလည်း မကွာခြားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ အကယ်၍ ခင်ဗျားရဲ့ မိဘ (သို့) ဘိုးဘွားတွေက ပါကစ္စတန်ကို ထောက်ခံတယ် ဆိုရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက လက်သင့်မခံပါဘူး။
ရိုဟင်ဂျာတော်တော်များများဟာ မကြာသေးခင်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထဲကို ခိုးဝင်ပြီး ကြောက်ခမန်းလိလိ ဒုက္ခသည်စခန်းကြီးတွေဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ ဒီတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအစိုးရက အဲဒီဒုက္ခသည်တွေကို အကူအညီပေးမဲ့ နိုင်ငံခြားအထောက်အကူပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရောက်နေတဲ့ မူဆလင်တွေဟာ သူတို့အတွက် မှတ်ပုံတင်လိုအပ်နေခဲ့တာပေါ့။ ပြီးတော့ “ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုတဲ့ အမည်ကို တည်ထွင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်တယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ပါကစ္စတန်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း
ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ ပါကစ္စတန်ကို ဘာလို့ မကြည့်ချင် မမြင်ချင်ကြလဲဆိုတော့။ Uပမာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်တုန်းက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ဦးရေ (၂၈) ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာကနေ ယခုဆို (၉)ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတော့တယ်လေ။ အဲဒါ ဘာ့ကြောင့်လဲ?။ ဟိန္ဒူတွေဟာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ကြရတယ်။ နိုင်ငံထဲကနေထွက်ပြေးအောင်လည်း ခြိ်မ်းခြောက်တာတွေ၊ ဖိအားပေးတာတွေလုပ်ခဲ့ကြလို့ပါ။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်တုန်းက ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ဟိန္ဒူ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဆိခ်ဘာသာဝင်ဦးရေ (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာမှ ယခုဆို (၁)ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိတော့တယ်လေ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ၁၇၉၀ မိုင်ရှည်တဲ့ သံမဏိထည်နဲ့တည်ဆောက်ထားပြီး သံဆူးကြိုးတွေနဲ့ ကာရံထားတဲ့ ခံတပ်သဖွယ် နယ်နိမိတ်စည်းရိုးကြီးကို ရှည်လျားလှတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှေ်နယ်နိမိတ်တလျှောက်လုံးမှာ တားဆီးတည်ဆောက်ထားခဲ့ တယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အကြမ်းဖက်သမားတွေ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာ အလုပ်အကိုင်လာရှာတဲ့ နိုင်ငံပြောင်းရွှေ့လာမဲ့သူတွေ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမနိုင်လောက်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူလှိုင်းကြီးတွေနဲ့ တခြားမူဆလင်တွေဝင်မလာနိုင်အောင် (သို့) ကင်းဝေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုပဲ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့ နယ်နိမိတ် မိုင် ၁၀၀၀ တလျှောက်လုံးကိုလည်း မူဆလင်အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ ကင်းလွှတ်အောင် အဓိကထားပြီး အဲဒီစည်းရိုးကြီး တွေကို တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နယ်နိမိတ်မှာတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ နယ်ခြားစည်းရိုးရယ်လို့ ဘာတစ်ခုမျှ မရှိပါဘူး။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ၁၄ မြို့နယ် သုံးရက်ကြာ ဂျိုးဖြူရေ ပြတ်မည်
Posted by drmyochit Sunday, September 16, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
From : The Voiceရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ သောက်သုံးရေများကို ဖြန့်ဝေရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်သော လှော်ကား ရေပေးဝေကန်မှ ရေပို့ပိုက်ကြီး ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်း ၁၄ မြို့နယ်တွင် သုံးရက်ကြာ ရေပြတ်တောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)ထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ အဆိုပါ ရေပြတ်တောက်မှုမှာ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ နံနက် ၆ နာရီက စတင်ကာ လှော်ကားရေပေးဝေရေးစခန်းမှ ရေဖြန့်ဝေသည့် မင်္ဂလာဒုံ၊ ရွှေပြည်သာ၊ အင်းစိန်၊ မရမ်းကုန်း၊ လှိုင်သာယာ၊ လှိုင်၊ တာမွေ၊ ရန်ကင်း၊ ကမာရွတ်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်၊ ပုဇွန်တောင်၊ ကျောက်တံတား၊ သာကေတနှင့် ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တို့တွင် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက် နံနက်ပိုင်းအထိ ခေတ္တရေပြတ်တောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ အဆိုပါ လှော်ကား ရေပို့ပိုက်ကြီးမှာ ၆၆ လက်မ ကွန်ကရစ်ပိုက်ဖြစ်ပြီး ၁၉၀၄ ခုနှစ်မှ စတင် အသုံးပြုခဲ့သဖြင့် နှစ်ကာလ ကြာမြင့်သောကြောင့် လည်းကောင်း၊ မြို့နယ်များကို တိုးချဲ့ရေပေးဝေသောကြောင့် လည်းကောင်း စက်စွမ်းအား အရှိန်မြင့် အသုံးပြုနေသောကြောင့် ကွန်ကရစ်ပိုက်ပေါက်မှု ဖြစ်ကာ ရေပြတ်တောက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရေနှင့် သန့်ရှင်းမှုဌာနမှ အမည်မဖော်လိုသူ အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ ရေပို့ပိုက်ကြီးကို နေ့ရောညပါ လူအား၊ စက်အားဖြင့် ပြုပြင်နေပြီးစက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ရေပြန်ပေးဝေနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေပြတ်တောက်မည့် မြို့နယ်များ အနေဖြင့် ယင်းမြို့နယ်များတွင် ဌာနပိုင် တွင်းများမှ တစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်၍ ရေပေးဝေ သွားမည်ဖြစ်သဖြင့် နေထိုင် သူပြည်သူများ စိုးရိမ်ရန်မလိုကြောင်း ယင်းဌာနထံမှ သိရသည်။ “ရေပြတ်မယ်ဆိုရင်လည်း ကြိုတင် အသိပေးသင့်တာပေါ့။ ရေမရှိလို့ မဖြစ်ဘူးလေ။ ရှိတဲ့ရေကိုပဲ ချွေတာပြီး သုံးရမယ်” ဟု တာမွေမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် အသက် ၅၀ အရွယ် အိမ်ရှင်မတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ လက်ရှိ ရေပြတ်တောက်သော မြို့နယ်များမှာ လှော်ကားရေပေးဝေရေး စခန်းက ပေးဝေ နေသော မြို့နယ်များဖြစ်ပြီး ကျန်ရေပေးဝေရေး စခန်းများဖြစ်သော ဂျိုးဖြူရေပေးဝေရေး စခန်းနှင့် ငမိုးရိပ်ရေပေးဝေရေး စခန်းတို့မှ ကျန်မြို့နယ်များကို ပုံမှန်အတိုင်း ရေပေးဝေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာနထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော်နေ ပြည်သူလူထုကို တစ်ရက်လျှင် ရေဂါလန်သန်း ၁၆၀ ဖြန့်ဝေ ပေးလျက်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် နေထိုင်သော လူဦးရေ ၅ ဒသမ ၁ သန်းကျော်တွင် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက ဖြန့်ဝေလျက်ရှိသော သောက်သုံးရေများကို တိုက်ရိုက် ရယူသုံးစွဲသူ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြောင်း ယင်းကော်မတီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရှိရသည်။
မြန်မာ-အမေရိကန် ကမ္ဘာအနှံ့ ပထမဆုံး ငွေလွှဲလုပ်ကိုင်မည်
From : အင်တာနက်
နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ ကျော်တွင် ငွေပေးချေခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အခြေစိုက် Western Union Company က မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ် (MOB) နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ကမ္ဘာအနှံ့ ငွေလွှဲခြင်းကို စတင် လုပ်ကိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်၏ အကြီးတန်း အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးသန်းဝင်းက ပြောကြားသည်။ Western Union Company နှင့် MOB တာဝန်ရှိသူများအကြား အကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးကာ သဘောတူညီချက် ရရှိပြီးဖြစ်သဖြင့် စက်တင်ဘာလကုန်တွင် Western Union ချိတ်ဆက်ထားသည့် နိုင်ငံများနှင့် အပြန်အလှန် ငွေလွှဲပို့ခြင်း စတင်နိုင် တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးသန်းဝင်းက ပြောဆိုသည်။ “World Wide (ကမ္ဘာအနှံ့) ငွေလွှဲနိုင်ဖို့က ဒါပထမဆုံးပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် Western Union ၏ Customer Service Center ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် လာရောက်ဖွင့်လှစ်ကာ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိလိုသည့် မေးမြန်းမှုများ၊ အခက်အခဲ ဖြေရှင်းပေးခြင်းများ လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြား ငွေလွှဲခြင်း များကို မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ် ၁၉ ခုက ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း MOB ၏ အကြီးတန်း အထွေထွေမန်နေဂျာက ရှင်းပြသည်။ Western Union အနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်ခွင့် ရသည့်အတွက် ကျေနပ်အားရမိကြောင်း မြန်မာ အရှေ့တိုင်းဘဏ် ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး Western Union ၏ အာရှ ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာနှင့် အကြီးတန်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Ms.Drina Yue က ထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်။ “ကျွန်မတို့ ရည်ရွယ်တာက ကျွန်မတို့ရဲ့နယ်ပယ် ချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့နဲ့ သန်းနဲ့ချီရှိတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားက မြန်မာတွေကို (ငွေလွှဲပို့ရာမှာ) အ ထောက်အပံ့ ပေးနိုင်ဖို့ပါ” ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ပြင်ပတွင် ရောက်ရှိနေသော နိုင်ငံသားများသည် တရားဝင် နိုင်ငံခြား ငွေလွှဲခြင်းများ အစား ယုံကြည်ရန်ခက်ခဲသည့် ဟွန်ဒီကိုသာ အားကိုးလာခဲ့ရာမှ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က ပုဂ္ဂလိကဘဏ် ၁၄ ခုကို နိုင်ငံခြား ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ရာ သမဝါယမဘဏ်၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်၊ ဧရာဝတီဘဏ်နှင့် အာရှစိမ်းလန်းမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့က ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူတို့နှင့် အပြန်အလှန် ငွေလွှဲခြင်း၊ မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်က ကမ္ဘာအနှံ့ ငွေလွှဲခြင်း တို့ကို စတင်လုပ်ကိုင်လာကြသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ ငွေလွှဲခြင်းကို စက်တင်ဘာလကုန်မှ စတင်ကာ မြန်မာအရှေ့တိုင်း ဘဏ်ခွဲများရှိရာ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မုံရွာ၊ မကွေး၊ တောင်တွင်းကြီး၊ တောင်ငူ၊ ပြည်၊ ပုသိမ်၊ ဟင်္သာတ၊ မော်လမြိုင်၊ မြိတ်မြို့တို့၌ ဆောင် ရွက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း MOB ဘဏ်ထံမှ သိရှိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်သုဝဏ္ဏရှိ အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရား ရုံး၌ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၂ အရစစ်ဆေး လျက်ရှိသော မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် နွယ်သာကီလမ်းထိပ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူသတ်မှုကို အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးမှ စီရင်ပိုင် ခွင့်တူညီသော သင့်တော်ရာ ခရိုင်တရားရုံး တစ်ခုခုသို့ လုံခြုံရေးအရ ပြောင်းရွှေ့ စစ်ဆေးခွင့်ပြု ပါရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရား လွှတ်တော်သို့ သက်ဆိုင်ရာက ဩဂုတ်လ ပထမသီတင်းပတ်အတွင်းက တင်သွင်း လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း ခရိုင်ဥပဒေ အရာရှိက မြန်မာတိုင်း(မ်)ကို ပြောကြား သည်။
အမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပုံမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင် ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ် ခန့်တွင် မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် (က) ရပ်ကွက် နွယ်သာကီ(၆)လမ်းထိပ်ရှိ အရက်ဆိုင်ရှေ့၌ နွယ်သာကီ(၈)လမ်း နေ ကျော်မင်း (၃၂ နှစ်)မှာ ယာဘက် ရင်အုံ ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ တစ်ချက်၊ ယာ ဘက် လက်ဖျံ ပြတ်ရှဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ လည်ကုပ်တွင် ပြတ်ရှဒဏ်ရာနှစ်ချက် ရရှိပြီး အမည်မသိသူ ငါးဦးက ဓားများနှင့် ၀ိုင်းခုတ် ခံရ၍ သေဆုံးခဲ့မှုကို မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်၊ ဝေသာကီရဲစခန်းက (ပ) ၅၂၂၂/၂၀၁၁ ပြစ်မှုပုဒ်မ၃၀၂ အရ အမှုဖွင့် အရေုးယူ ခဲ့သည်။
အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့ အထူးမှုခင်းနှိမ်နင်းရေးဌာနစု မှူး ရဲအုပ်မျိုးအောင်မြင့်နှင့်အဖွဲ့က ကျော်လွင် (၄၅ နှစ်)ကို နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ မြောက် ဥက္ကလာပမြို့နယ်နေ သက်ဦး (၄၄ နှစ်)၊ သက်ဇော်ထွန်း (၁၉ နှစ်)နှင့်မသီတာ(ခ) မခင်နှင်းသီတာ (၄၃ နှစ်)တို့ကိုလည်း ထိုနေ့၌ပင် ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ မှုခင်းအကူဌာနစုမှူးကလည်း သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်နေ ထွန်းထွန်းဝင်း (ခ) ရဲအောင် (ခ) ကျွဲကြီး (ခ) ခတ္တာ (၃၈ နှစ်)ကို နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့တွင်ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ပြီး ဒုစရိုက် နှိမ်နင်းရေး ဌာနစုက ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်နေ ဇင်မင်းထက် (ခ) ဒီမိုး (၂၃ နှစ်)ကိုလည်းကောင်း၊
အနောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့အထူးမှုခင်း နှိမ်နင်းရေး ဌာနစုမှူးမှ မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်နေ ညီညီဦး (ခ) ညီဦး (၃၇ နှစ်) ကိုလည်းကောင်း ဆက်လက်ဖမ်းဆီး ရမိ ခဲ့သည်။
“အမှုစစ်ဆေးနေစဉ် ဘယ်သူက ဓားနဲ့ ထိုးတယ်လို့ပြတဲ့ တရားလိုပြသက်သေ ကို ဖမ်းထားတဲ့ တရားခံက လက်ထိပ်နဲ့ ခေါင်းကို ရိုက်မလို့ ရဲက အဆွဲမြန်လို့၊ သူတို့က နည်းနည်းကြမ်းတယ်”ဟု အမှု လိုက် ဥပဒေအရာရှိက ရှင်းပြသည်။
“တစ်ခါတစ်ရံ အချုပ်ကားနဲ့ ခေါ်လာ ရင် အပြန်မှာ ရန်ဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်။ ရန်ဖြစ်လို့ တံခါးဖွင့်မိလိုက်ရင် ကားထဲ မှာ လက်ထိပ်ခတ် မထားတာကြောင့် ပြေး မယ်ဆိုရင် ပြေးနိုင်တယ်”ဟု မျက်မြင်တွေ့ရှိသူ အမျိုးသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
အမှုကို ရုံးပြောင်းလျှောက်ထားနေ စဉ်အတွင်း စစ်ဆေးခြင်းကို ခေတ္တဆိုင်းငံ့ ထားပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရား လွှတ်တော်က အမိန့်ချမှတ်ပြီးမှသာ ဆက်လက် စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြံ့ ခိုင်ရေး ဘာကြောင့်ရှုံးနိမ့် ခဲ့ ရတာလဲ(ပေးစာ - ၁၆၈)
ကြံ့ ခိုင်ရေးအသင်းကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ လူမူ့ ရေးအသင်းအဖွဲ့ အဖြစ်နဲ့စတင်ဦးတည် လမ်းကြောင်းပေးခဲ့ တဲ့ဦးသန်းရွှေ လမ်းစဉ်ကောင်းသလောက် အကောင်အထည်ဖော်တဲ့သူတွေက နည်းနည်းယုံကြည်မူ့ လွန်ကဲနေခဲ့ တယ်တကယ်ဆို ဒီအသင်းရဲ့ အမာခံတွေက တပ်မတော် မိသားစုဝင်တွေ အများစု။စစ်သားတစ်ယောက်မှာ မိသားစု ၃ ဦးပဲရှိတယ်ထား။တနိင်ငံလုံးက သားချစ်ရင် တော့သူ့ ဆန်စားရဲမဲ့ သူတွေကြီးပဲ။ဒါတောင်အမျိုးတွေ မပါသေးဘူး။
မဲရပြီးတာနဲ့ ဒီအမာတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ဘာတွေလဲဆိုတာ သိအောင် မကြိုးစား ခဲ့ကြဘူး....... ဘာတွေလို ချင်လဲ ဆိုတာလည်း မမေးမြန်းခဲ့ ကြဘူး.............
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မဲရဖို့ကော့ မှူးကို သွားတယ်မဲ ရပြီးတော့ လည်း ကော့ မှူးကိုသွားတယ်
ဆိုလိုတာက သူ့ မှာ ဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အနည်းဆုံး ဒီလောက်တော့ လုပ်သင့် တယ်
ပိုဆိုးတာက ပြင်ဦးလွယ်တပ်နယ်လိုမျိုးနေပြည်တော်လိုမျိူး မှာ မဲရှုံး တာက ကိုတင်ထားတဲ့အစိုးရ၊တနည်းအားဖြင့်ကိုမဲထည့် ထားတဲ့ပါတီကို အယုံအကြည်မရှိတော့ တာပဲ.......
ဒီလို မျိုး ဂရုစိုက်မူ့နည်းပါးခဲ့ ရင်
ကြံ့ ခိုင်ရေး ပါတီ ၂၀၁၅ မှာ အောင်မြင်ဖို့မမျှော်လင့် ပါတော့နဲ့ 
ကျနော် ကြံ့ ခိုင်ရေး ပါတီကိုချစ်ပါတယ်...
နားနှင့်ပတ်သက်ပြီး မပြုလုပ်သင့်သော အရာများ..
Posted by drmyochit Sunday, September 16, 2012, under သတင်းများ | No comments
From : မင်းမြတ်
နားတွေမှာ သူဘာသာသန့်စင်စေခြင်းနဲ့ သူဘာသာ ကာကွယ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ သဘာဝသတ္တိရှိပြီးသားပါ။ ဒါ့ကြောင့် နားတွေကို မမှန်ကန်တဲ့နည်းတွေနဲ့ သန့်စင်ဆေးကြောမှု ပြုလုပ်တဲ့အခါ နားမှာ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရခြင်းနဲ့ နားတွင်း ကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းဆိုတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နားဖာချေးကို မကလော်ပါနဲ့ နားဖားချေး တွေဟာ နားရဲ့ သူ့ဘာသာ သန့်စင်စေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ နားဖာချေးတွေဟာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပိတ်ဆို့ မနေရင် ကလော်ပြီး မဖယ်ရှားသင့်ပါဘူး။ အပြင် နားစည်အရေပြားရှိ ဂလင်းကနေ ထုတ်ပေးလေ့ရှိတဲ့ နာဖာချေးတွေဟာ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ တွေကို လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
နားစည်ထဲ ဘာမှ မထည့်ပါနဲ့ နားအတွင်းထဲကို ဝါဂွမ်းစ၊ လက်ချောင်း၊ ကလစ်လို ချွန်ထက်တဲ့ အရာတွေ မထည့်ပါနဲ့။ နားအတွင်းထဲ ပြင်ပပစ္စည်းထည့်တာဟာ နားစည်ရဲ့ နူးညံ့တဲ့ အရေပြားကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေသလို အခန့်မသင့်ရင် နားစည်ကို ပေါက်ပြဲစေပါတယ်။ လူအများစုဟာ နားဖာချေးထွက်သွားအောင် နားထဲကို ပြင်ပပစ္စည်းထည့်ပြီး ကလော်ထုတ်တတ်ကြပါတယ်။
နားဖာချေး သိပ်မရှိဘဲ ပြင်ပပစ္စည်းဟာ နားစည်အထိရောက်သွားရင် နားကို မသက်မသာ ဖြစ်စေကာ ယာယီနားမကြားတော့တာမျိုး ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ နားစည် အရေပြားခြစ်မိခြင်းနဲ့ နှာချေးဟာ နားစည်အတွင်းထဲအထိ ရောက်ရှိသွားခြင်းတွေကြောင့် နားတွင်းကူးစက်ပိုးဝင်တဲ့ အန္တရာယ်လဲ များပါတယ်။
နားအတွင်းထဲ မဆေးကြောပါနဲ့ နားရဲ့ အပြင်ဘက်ပိုင်း ညစ်ပတ်နေရင် ဆပ်ပြာနဲ့ ရေစိုစွတ်နေတဲ့ နူးညံ့တဲ့ အဝတ်စသုံးပြီး ဆေးကြောပေးပါ။ ဒါပေမဲ့ နားအတွင်းထဲကိုတော့ အဝတ်စ၊ လက်ချောင်းနဲ့ တခြားဘာမှ ထည့်ပြီး မဆေးကြောပါနဲ့။ ကလေးရဲ့ နားကို ဆေးကြော သန့်စင်ပေးချင်ရင်လည်း ဝါဂွမ်းစကို ဆပ်ပြာမပါတဲ့ ရေထဲထည့်ပြီး ဆေးကြောပေးလို့ ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နားကို ခြောက်သွေ့အောင် ပြန်ပြုလုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ရေကူးတဲ့သူတွေမှာ နားခြောက်သွေ့အောင် အထူးဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ တကယ်လို့ နားတွင်းပိုးဝင်ပြီး နာကျင်နေရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ပြပါ။
နားထဲက ပြင်ပပစ္စည်းကို အတင်းမဖယ်ရှားပါနဲ့ လူကြီးတွေကော ကလေးတွေမှာပါ နားထဲ ပြင်ပ ပစ္စည်း ဝင်နိုင်ပါတယ်။ လူကြီးတွေမှာတော့ နားကပ်ကျွတ်ပြီး မတော်တဆ နားထဲ ဝင်သွားတာဖြစ်တတ်ပြီး ကလေးတွေကတော့ စနောက်ချင်စိတ်၊ စပ်စုလိုစိတ်နဲ့ အခြားကလေးရဲ့နားထဲဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်နားထဲ ပြင်ပပစ္စည်းထည့်တတ်ကြပါတယ်။
နားထဲ နားဖာချေးပိတ်ဆို့နေခြင်း နားထဲ နားဖာချေး အလွန်အမင်း ပိတ်ဆို့နေပြီး ဖယ်ရှားဖို့လိုတဲ့ အခြေအနေတွေရှိပါတယ်။ ဖယ်ရှားဖို့ လိုတဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေကတော့ နားအကြားအာရုံ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ နားကိုက်ခြင်း၊ နားအူခြင်း၊ နားထဲပြည့်နေသလို ခံစားရခြင်း စတာတွေပါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအခါ မိမိဘာသာ နားထဲက နားဖာချေး ထုတ်တာမျိုး မလုပ်ဘဲ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ ပြသလိုက်ပါ။
""ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမြဲ အားကိုးနေရန် မဖြစ်ဟု NLD ပြော""
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ အနေဖြင့် လူပုဂ္ဂိုလ် တဦးတည်းကို မှီခို အားထားသော ပါတီ မဖြစ်စေရေးအတွက် ပြုပြင်မှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က ၎င်းနေရာအား ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့်သူအား စဉ်းစားနေကြောင်း ပါတီ နာယက ဦးတင်ဦး က ပြောသည်။
NLD ပါတီသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးပါတီများထဲတွင် သြဇာအင်အား အကြီးဆုံးဖြစ်သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မရှိလျင် ပါတီမရှိနိုင်တော့ဟု ပြောဆိုဝေဖန်မှုများလည်း ရှိနေသည်။
သို့သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် NLD ခေါင်းဆောင်များက လူငယ်သွေးသစ်များအား သွေးသစ်လောင်း၍ အားဖြည့်ရန် ပြင်ဆင်နေ သည်ဟုဆိုသည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း သဘောပေါက်တဲ့အတွက် သူ့နေရာမှာ လာပြီး ဝင်ပြီး လုပ်ကိုင်နိုင်သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခြေအနေ ဖန်တီးဖို့ သူ့ခေါင်းထဲမှာရှိတယ်၊ သူ စဉ်းစားထားတယ်၊ ကျနော်တို့လည်း စဉ်းစားထားတယ်၊ တဦးကောင်း လုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးဟာ မမြဲပါဘူး ” ဟု ဦးတင်ဦး က ပြောသည်။
လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၁၉၉၈ အရေးတော်ပုံမှ စ၍ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ဦးဆောင်သူ တဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် တနိုင်ငံလုံး မဲအပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိခဲ့သော်လည်း အစိုးရက အာဏာလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း မပြုခဲ့ပေ။
နောက်ပိုင်းတွင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အကြိမ်ကြိမ် ချထားခြင်းခံခဲ့ရပြီး စစ်အစိုးရက ဦးဆောင်ကျင်းပသော ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး တပတ်အကြာတွင် လွှတ်မြောက်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး မဲအပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိကာ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။
မဲဆန္ဒရှင် အများစုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ အားကိုးမျှော်လင့်မှုများဖြင့် မဲဆန္ဒ ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်သံများ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ပါတီက ယင်းသို့ မဖြစ်စေရေးအတွက် ယခုအခါ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် ပါတီအနာဂတ်အတွက် လူငယ်များကို ဦးစားပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အတူ ပါတီ ဗဟို အဖွဲ့ချုပ် တွင်လည်း ယခုလမှ စတင်ကာ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းအသီးသီးရှိ အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်လူငယ်များကိုလည်း နိုင်ငံရေး စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းများ ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လူငယ်များဖြင့် အားဖြည့်ထားသော NLD ပါတီအနေဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် တက်ကြွမြန်ဆန်သည့် ပါတီတရပ်အဖြစ် မြင်တွေ့ လာရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ နိုင်ငံရေး ပါတီများအကြား ပြိုင်ဆိုင်မှု ပိုမို ပြင်းထန် လာနိုင်သည်ဟု ဦးတင်ဦးကပြောသည်။
“ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျနော်တို့ ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့်ကိစ္စသည် အရင်ကလို မလွယ်ဘူး၊ အဲဒါကြောင့် လုပ်ရမယ်၊ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ လုပ်တဲ့နေရာမှာ ပိုမိုပြီးတော့ ပြည်သူလူထု ယုံကြည်မှုရဖို့အတွက် ညီညွှတ် နိုင်တဲ့ အားဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်” ဟု သူကပြောသည်။
NLD ဖြစ်တည်လာရခြင်းသည် ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံ၏ ကိုယ်ကျိုးစွန့်မှုများမှ ဖြစ်တည် လာရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ၈၈ မျိုးဆက်များအနေနှင့် ပါတီသို့ လာရောက်ပူးပေါင်းလိုပါက ကြိုဆိုကြောင်း NLD ၏ သဘောထားကို ပြောဆိုသည်။
ထို့ပြင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ၈၈ မျိုးဆက်များနှင့် အခြားအတိုက်အခံ အင်အားစုများ အနေဖြင့်
ဒီမိုကရေစီအရေး ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အခက်ခဲအမျိုးမျိုးကိုလည်း စာနာကြောင်းနှင့် ထိုအဖွဲ့များ အနေဖြင့် ယခုချိန်ထိ NLD ပါတီသို့ ဝင်ရောက်ရန် ပြောဆိုခြင်းများမရှိသေးကြောင်း ဦးတင်ဦးက ရှင်းပြသည်။
၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် NLD က မဲအပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိလိမ့်မည်ဟု အများက မျှော်လင့် ထားသော်လည်း မလွယ်ကူကြောင်း၊ ပါတီကြီးတစ်ခုဖြစ်သော ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီ အပါအဝင် အခြားသော ပါတီများ ကလည်း အားနည်းချက်များကို ပြုပြင်ကာ အရှိန်ရနေကြမည်ဆိုသည်ကို သတိရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း လည်း ပြောဆိုသည်။
From : မင်းသား
ဧရာဝတီတိုင်းမြို့တော် ပုသိမ်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD မြို့နယ်ရုံးကို 'အသိအမှတ်မပြု' ကြောင်း ပါတီဗဟိုဌာနချုပ်က ကြာသပတေးနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာ လိုက်သည်။ပါတီ ဗဟိုညီလာခံ ကျင်းပရေးကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်မှုတရပ်တွင် ပုသိမ်မြို့ အမှတ် ၅၇၂ စကားဝါလမ်း အမှတ် ၃ ရပ်ကွက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ရုံးသည် “အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က အသိအမှတ်မပြုသဖြင့် တရားဝင် ရှိနေသော အဖွဲ့ချုပ် ရုံးခန်း မဟုတ်ပါ” ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။
အဆိုပါရုံးကို အဖွဲ့ချုပ်နာယက ဦးတင်ဦး ကိုယ်တိုင် ဇန်နဝါရီလ အတွင်းက လာရောက် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က ပုသိမ်မြို့တွင် ပါတီဝင် အချို့၏ ပါတီဗဟိုကို ဝေဖန်သော သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲ တခု ပြုလုပ်ပြီးနောက် ဗဟိုမှ ယခုကဲ့သို့ တုံ့ပြန်လိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ထိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ “အဖွဲ့ချုပ်အတွင်း စိတ်ဝမ်းကွဲစေရန် ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်သည်ဟု သတ်မှတ်ပါသည်” ဟု ရန်ကုန်ရှိ NLD ဗဟိုက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ပါတီဝင် ဦးညွှန့်လှိုင်၊ ဒေါက်တာ သန်းထိုက်နှင့် ဦးသန်ဝင်းတို့အားလည်း “အဖွဲ့ချုပ်ကို ဆန့်ကျင်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ” ပြုလုပ်သည် ဟူသည့် စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ပါတီဝင်အဖြစ်မှ ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။
ထို ဂယက်ရိုက်ခဲ့သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဦးညွှန့်လှိုင် က “ဒီမိုကရေစီရေးကို ကြွေးကြော်ထားသော ပါတီတခု က ဗဟိုဦးစီးစနစ်နဲ့ သွားနေပြီး ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းများကို သွေဖည်နေတာတွေ၊ ဆရာမွေး တပည့်မွေး လုပ်နေတာ ကို လက်မခံနိုင်” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
“အောက်ခြေအဆင့် ပါတီဝင်များ တင်ပြသော ခံစားချက်များကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုမှ အလေးမထား ဘဲ ပစ်ပယ်ထားပြီး ပါတီဝင်တို့၏ ဆန္ဒကို နည်းမျိုးစုံနှင့် ဖော်ထုတ်ပါမည်။” ဟု ဒေါက်တာသန်းထိုက်က ထိုသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသွားခဲ့သည်။
ဦးညွှန့်လှိုင်မှာ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်၏ ရွေးကောက်ခံ အမတ်တဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာသန်းထိုက်မှာ ၂ဝ၁၁ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မြို့နယ်အောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ပုသိမ် မဲဆန္ဒနယ်တွင် NLD က အနိုင်ရခဲ့သည်။
ထိုသို့ ပါတီဗဟိုက တရားမဝင်ဟု ဆိုလာခဲ့ပြီးနောက် ရုံးစိုက်ရာကို ဥမ္မာဒန္တီလမ်း၊ အမှတ် ၄ ရပ်ကွက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ ရန် စီစဉ်လျက်ရှိနေသည်ဟု မြို့နယ်ညီလာခံ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသီဟ က ပြောသည်။
အလားတူ ရန်ကုန်တိုင်း တွံ့တေးမြို့နယ် ပါတီဝင်များကလည်း NLD ဗဟိုကို “နီးစပ်သူများကိုသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်
ပေးသည်” ဟူသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့က ဆန္ဒပြခဲ့ကြဖူးသည်။
မြောင်းမြမြို့တွင်လည်း အလားတူပင် စွပ်စွဲဆန္ဒပြခဲ့ကြရာ ပါတီဝင် ဦးမြင့်ကျော်နှင့် ဦးဝင်းရွှေတို့ကို ပါတီမှ ခေတ္တ ထုတ်ပယ်ထားခြင်း ခံကြရသည်။
နေပြည်တော်၌ MPU စနစ်အတွက် Recovery Center ဆောက်လုပ် သွားမည်
Myanmar Payment Union MPU Data များ အကြောင်း တစုံတရာကြောင့် ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက Data Back Up အနေနဲ့ ရှိနေစေဖို့ အတွက်
နေပြည်တော်မှာ Recovery Center ၁ ခု ဆောက်လုပ် သွားဖို့ ရှိတယ်လို့ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့က ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ဗဟိုဘဏ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Myanmar Payment Union Card ထုတ်ဝေ သုံးစွဲခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရှင်းလင်း တင်ပြခြင်း အခမ်းအနားမှ MPU စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးရဲမင်းဦးရဲ့ ပြောကြားချက် အရ သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီလို Recovery Center ဆောက်လုပ် ရခြင်းမှာ ရန်ကုန်ရှိ Data Center ရှိစက်များ အကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် တစ်ခုခု ဖြစ်သွားခဲ့ရင် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှုများ မရှိစေဖို့ အတွက် Data များ သိမ်းဆည်း ထားဖို့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အခု လက်ရှိမှာ MPU အတွက် ရုံးခန်း Data Center ကို မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် ရန်ကုန်မှာ ထားရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Data Center ကနေပြီး MPU ကတ်များကို ဘဏ်များအလိုက် ထုတ်ဝေပေးခြင်း၊ ATM စက်များနဲ့ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုတဲ့ POS စက်များမှာ သုံးစွဲမှု၊ ပေးချေမှုများ စာရင်း ရှင်းလင်းနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ MPU ကတ်သုံးစွဲခြင်း ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း အတွက် စီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်ခြင်း များကို ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု လက်ရှိမှာ MPU ရဲ့ Card System Project အတွက် ပြည်တွင်းမှ MIT ကုမ္ပဏီနဲ့ Access Spectrum ကုမ္ပဏီတို့မှ Network နဲ့ Software ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိတယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။
မြန်မာမိန်းကလေးများ ကိုယ့်ကိုကို တန်ဖိုးထားတတ်ပြီး ၊ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေ။
ယုခုဆို နည်းပညာတိုးတက်လာခြင်းကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးများကောင်းလာပြီး ကမ္ဘာကြီးဟာ ရွာလို့ပင် တင်စား နိုင်ပြီဖြစ် ပါတယ်။ယခုအချိန်ဆို အင်တာနက်ဆိုတာ လူတိုင်း သုံးနိုင်ပြီး လူတန်းစားမျိုးစုံ သုံး
တတ်တဲ့ အခြေနေသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ဆယ်တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ်တက်စက အင်တာနက်ဆိုတာ ကြားသာကြားဖူး ခဲ့တာ ဘယ်လိုသုံးရလဲ ဘာ တွေအသုံးဝင်လဲဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူး။
အမှတ်မကောင်းတော့ တက္ကသိုလ်အဝေးသင်ယူရင်းနဲ့ ကွန်ပြူတာကို စိတ်ဝင်စားလို့အပြင်
သင်တန်းတွေ တက်နေတဲ့အထိ အင်တာနက်ဆိုတာကို ဘာမှန်းညာမှန်းမသိခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ မှတ်မှတ်ရရ ၂၀၀၄ -၂၀၀၅ လောက်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ရောက်က ဘယ်လိုသုံးရလဲ ဆိုတာ သင်ပေးရင်းနဲ့ စတင် သုံးတတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအချိန်မှာတော့ အင်တာနက်ဆိုတာ ကလေးအစ အရွယ်စုံ သုံးတတ်နေကြပါပြီ။ အင်တာနက်ဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆက်သွယ်ရေးမှာလဲ အင်မတန် လွယ်ကူ မြန်ဆန်သလို အွန်လိုင်းကနေတဆင့် ယောင်္ကျားလေးတွေ မိန်းကလေးတွေ ခင်မင်ရင်နှီး၊ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပြီး နောက်ဆုံး လက်ထပ်ကြတဲ့ အထိ များစွာ
အကောင်းနဲ့ အဆိုးကတော့ အမြဲတန်းဒွန့်တွဲနေကြပါတယ်။တိုးတက်လာတဲ့ အင်တာနက် နည်းပညာကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတဲ့သူများအတွက်တော့ အကျိုးကျေးဇူးများရရှိပြီး ၊ တလွဲ အသုံးချသူများအဖို့တော့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေ ရှိခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
အွန်လိုင်းကနေ တဆင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားပြီး ငွေများတောင်းခံခြင်း၊ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးများကို အွန်လိုင်းကနေ တဆင့် ခြမ်းခြောက်ခြင်း၊ ဖျားရောင်းသွေးဆောင်ပြီး ဖျက်ဆီးခြင်း၊ အကျပ်ကိုင် ငွေညှစ် ခြင်းများကိုလဲ သတင်း ဂျာနယ်၊ ဘလော့များတွင် တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံခေတ်မှီတိုးတက်လာသည်နှင့် အမျှ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု များလဲ ပျက်စီးလာတာတွေ့ရပါတယ်။ အနောက်တိုင်း အ၀တ်အစားများ၊ကိုရီးယားအ၀တ်အစားများ ခေတ်စားလာခြင်းကြောင့် မြန်မာ မိန်းကလေး တချို့ မလုံမခြုံအ၀တ်အစားများ အ၀တ်များကြပြီး သူတို့ရဲ့ အန္တရယ်ကို ဖိတ်ခေါ်သကဲ့သို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
အတုယူသင့်တာကို မယူ ၊ အတုမယူသင့်တာကို ယူကြတဲ့အတွက် ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ အ်ိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်တဲ့ကားများ ၊ အချစ်ကားများကြောင့် မြန်မာ မိန်းကလေး တချို့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်း ပျက်စီး လာကြတာကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။
အားလုံးမကောင်းဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကောင်း တဲ့သူက ကောင်းပါတယ်လို့ ကြိုတင်ပြောခဲ့ပါရစေ။
ကျွန်တော် သိတဲ့သူတစ်ရောက်ပေါ့၊ သူက နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ ဒီကို ခန ပြန်လာတာပေါ့။ အွန်လိုင်းကို အားရင် အချိန်တော်တော်များ သုံးပြီး facebook ကိုလဲ အမြဲတန်း သုံးနေကြပေါ့။ ဒီမှာ ခန ရောက်ခိုက် အွန်လိုင်းကနေ ကောင်မလေး တစ်ရောက်နဲ့သိပြီး ဖုန်းတွေဆက် ၊ကောင်းမလေးဆီ သွားလည်ရင်းနဲ့ ဘာလိုလို ညာလိုလိုဖြစ်သွားတဲ့ ထိတော့ သိခဲ့တာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ၂ လလောက်နေပြီး နိုင်ငံခြားကိုပြန်ထွက်တော့မယ့် အချိန် တွေ့ဆုံခိုက်မှာ သူ့ကောင် မလေးပုံဆိုပြီး ဓာတ်ပုံထုတ် ပြပြီးကြွားတာပေါ့။
ဓာတ်ပုံထဲမှာ အခန်း တစ်ခန်း မီးရောင်မှိန်မှိန် လေးထဲမှာ ကောင်မလေးနဲ့ သူနဲ့ ဖက်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေ။
ဒါနဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ရိုက်ထားတာလဲမေးကြည့်တော့ သူကပြောတယ် မင်းဒါလေးတောင်
မသိဘူးလားတဲ့၊ တည်းခိုခန်းမှာ ရိုက်ထားတာလို့ ပြောပါတယ်။
ကြားကြားခြင်း ကောင်မလေးရဲ့စိတ်ကို တော်တော်အံသြ သွားပါတယ်၊ ပျက်စီးနေတဲ့ မိန်းကလေးလဲ မဟုတ်တဲ့ အတွက် ၁ လ ၂ လ အတွင်း အွန်လိုင်းကနေ အချိန်တိုလေးအတွင်း သိခဲ့ တဲ့သူတစ်ရောက်ကို ဒီလိုအခြေအနေထိ ဖြစ်ခဲ့ကြတာကို မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါဘဲ။
ရုပ်ချော အပြောကောင်းလို့လား၊ နိုင်ငံခြားပြန် ပိုက်ဆံသုံးနိုင်တဲ့ သူမို့လို့လား ၊ အယုံလွယ်သူ မလို့လားတော့ မသိပါဘူး ၊သူ့အကြောင်းကိုယ့်အကြောင်းလဲ သေချာမသိ၊ စိတ်နေစိတ်ထားလဲ ကောင်းလားဆိုးလား မသိဘဲနဲ့ အချိန် ၁ လကျော်လေးအတွင်းမှာ ဒီလို အခြေအနေထိရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ ၊ နိုင်ငံခြား ဥရောပ နိုင်ငံတွေရဲ့ အခုမြင် အခုကြိုက်ကြပြီး LivingTogether ကို သဘောကြလို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် ခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် အပေးအကမ်း ရက်ရောတယ်လို့ပြောရမလားတောင် မသိတော့ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ ယောင်္ကျားလေးကိုတော့ အပြစ်ပြောရင်ပြောကြမှာပါ၊
ဒါပေမယ့် ယောင်္ကျားလေးချင်းမလို့ ဘက်လိုက်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ခုပ်ဆိုတာ တစ်ဖက်ထဲနဲ့ မမည်ပါဘူး၊ လက်နှစ်ဖက်တီးမှ မည်တာပါ။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးဘက်က အရင်ထိခိုက် နစ်နာမှာဆိုတော့ ကြိုတင်စဉ်းစားပြီး ကိုယ့်ကိုကို ထိန်းသိမ်း သင့်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အဲဒီတစ်ယောက်က နိုင်ငံခြားရောက်သွားပြီး ၂ လ ၃ လ လောက်ကြာတော့
အွန်လိုင်းမှာတွေ့လို့ စကားပြောရင်းနဲ့ မေးဖြစ်တယ်၊ ဟိုကောင်မလေးနဲ့ကော အဆက်အသွယ်ရှိသေးလားပေါ့၊ သူကပြန်ပြောတယ် ငါအ ဆက်အသွယ်ဖြတ် လိုက်ပြီတဲ့လေ။
ကာယကံရှင်တွေကတော့ ဘယ်လိုခံစားပြီး၊ ဘယ်လို သဘောထားလဲတော့ မသိပါဘူး။
ကျွန်တော်ကတော့ မိန်းကလေးအတွက် နှမချင်းကိုယ်ချင်းစာပြီး သက်ပျင်းချမိလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာမိန်းကလေး တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကို တန်ဖိုးထားပြီး ကိုယ့်ဘ၀အတွက် လက်တွဲမယ့်သူ အပေါ်ကို သစ္စာရှိရှိ စောင့်ထိန်းသင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။စိတ်အလိုလိုက် မှုကြောင့်ဘ၀ကို ပုံအပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တောင် အဲဒီလူဟာ အချိန်ကြာကြာလက်တွဲခဲ့ပြီး ကိုယ့်ကိုတစ်ကယ်ချစ်တဲ့သူ၊ အမှန် တကယ် လက်တွဲ လက်ထပ်မယ့်သူသာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပညာပေး ဘလော့ရေးတိုင်း အမြဲတန်း လိုလို ပြောနေကြစကားရှိပါတယ်။
“ လူတစ်ရောက်ကို အချိန်ခဏလေးအတွင်း မယုံကြည်သင့်ပေ၊ အချိန်ကြာကြာလက်တွဲ၊ စကားများများ ပြောကြည့်ပြီးမှ လူတစ်ရောက်ရဲ့ အတွင်းစိတ်၊ ကိုယ့်ကျင့်တရားကို သိနိုင်ပေသည်။
ထိုမှသာ ကိုယ့်အတွက် လူကောင်းလား လူဆိုးလားဆိုတာကို တွက်ချက်နိုင်ပါလိမ့်မည် “
ကြားဖူး မြင်ဖူး တွေ့ဖူးခဲ့သော ယခုလို ဖြစ်စဉ်မျိုး အများကြီးထဲမှ တစ်ခုကို မိန်းကလေးများအတွက်၊ အထူး သဖြင့် ယခုခေတ် ကာလတွင် အဖြစ်အများဆုံး တက္ကသိုလ်တက်စ စိတ်ကစားတတ်တဲ့အရွယ် ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေးများအတွက် အချစ်ကို ကိုးကွယ်ပြီး ဒုက္ခမရောက်စေရန်၊
ကိုယ့်ကိုကို တန်ဖိုးထား ထိန်းသိမ်းတတ်စေရန် အတွက် ဗဟုသုတ၊ ပညာပေး ၊ ရှောင်ကြဉ် သင့်တာ ရှောင်ကြဉ် နိုင်အောင် ရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိန်းကလေးအားလုံးကို မဆိုလိုပါ။ ကျွန်တော်ဘဲ ခေတ်နောက်ကြ ကျန်နေခဲ့တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် တိုးတက်သွားလို့ လိုက်မမှီတော့တာလား မသိတော့ပါဘူး။
ဒီလို တိုးတက်လာပုံမျိုးကိုတော့ စိုးရိမ် ကြောက်လန့်မိပါတယ်။ မြန်မာမိန်းကလေးများ အနေဖြင့် အသားကပ် ဘောင်းဘီများ၊ ပေါင်တို ဘောင်းဘီများဝတ်ခြင်းတို့ကို အားမကြ အတုမယူကြဘဲ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အ၀တ်အစားများ၊ မြန်မာ့စိတ်ဓာတ် ၊ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို ထိမ်းသိမ်း စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္တပြုရင်းနဲ့ ရေးထားတာ အမှားပါရင် ခွင့်လွတ် ပေးကြပါလို့ 
စာရေးဆရာ နာမည် ပါလာပါဘူး။
ခြေရှုပ်သူရဲ့ ဇနီးမယားတုို့ သိစေဖို့
စာရှည်လို့ မဖက်ပဲမနေပါနဲ့ အကျိုးရှိ စေမယ်ထင်လို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မ သူ့ ကိုအမြဲ သတိပေးနေကြ “ ခင်မရေ.. ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်နေကွဲ့..တော်ကြာ ကိုတင်အောင်ကြီး နောက်တစ်ယောက် တွေ့မယ်နော် ” လို့ အမြဲတွေ့တုိုင်းပြောဖြစ်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ သူငယ်ချင်း ခင်မ က
“အိုအေ..ကလေးပဲ၃ ယောက်ရနေပြီ ဒင်းခြေမရှုပ်ရဲပါဘူး..ခင်မလက်ချက်မိသွားမှာပေါ့” လို့ ပြန်ပြော တတ်တယ်။ ကျွန်မ သက်ပြင်းချရင်း “ အဲဒီ “ခပ်ကြမ်းကြမ်းအပြောတွေပါ လျော့အေ.. ဒါဘဲ.. ငါထပ်မပြောချင်တော့ဘူး.. ရင်လေးတယ်” ပြောလဲပြော ကျွန်မသူ့ အိမ်ကနေ လေးကန်စွာနဲ့ ပြန်လာမိတယ်။ လမ်းတစ်လျောက်လဲ အတွေးတွေက ဟိုရောက်ဒီရောက် ပေမယ့် ခင်မရဲ့ ငယ်ရုပ်ငယ်သွေးကို ပြန်မြင်ယောင် နေတာတော့အကြိမ်ကြိမ်ပါပဲ။
ခင်မအပျိုဘဝက တော်တော်လှတဲ့ မိန်းမ စာရင်းဝင်မယ်ထင်တယ်။ ခုများတော့ ကလေး ၃ ယောက် က တစ်ဖက် အိမ်မှုကိစ္စက တစ်ဖက်နဲ့ ဆံပင်စုတ်ဖွာ ကို ညှပ်ကလစ်ကြီးနဲ့နောက်လှန်တင်ထား ပြီး အနွေးထည် တစ်ထည် ခပ်ပါးပါးကို အမြဲဝတ်ထားတာ မြင်ရတော့ အဖွားကြီးအို ပေါက်စနှယ် ရှိရင်းစွဲ အသက်ထက် ရင့်ရော်လုို့ နေတယ်.။ အသက် ကတော့ကျွန်မနဲ့တူတူ ၃၈ ပေါ့။ သူတုို့ အိမ်ထောင်သက် လဲမနည်းတော့ ပါဘူး. ကျွန်မတို့ အိမ်ထောင်သက် နီးနီးလောက်ပဲ ။
သမီးအကြီးလေးတောင် ၇ တန်းတက်နေပြီပဲ.။ အငယ်ဆုံးသား လေးက တော့မူကြိုတက်နေတဲ့ အရွယ်လေးပဲ ရှိသေးတယ်။ ကလေးတွေကျောင်းပို့ရင်းအ်ိမ်ရှေ့ ကနေ အမြဲ ပျာရီးပျာယာနဲ့ အငယ်ဆုံး ကလေးလက်ကို ဆွဲပြီး ဖြတ်လျောက်သွားနေကျ၊ အပြန်ကျတော့ကလေးမပါတာမို့ ကျွန်မအိမ်ကိုတစ်ထောက်ဝင်နားရင်း သူ့ အိမ်သားကိုတင်အောင့် အတင်းလာလာတုတ်နေလေ့ရှိတယ်.။
သူအမြဲ ပြောနေကျစကားက “ လင်နေစ ဆင်သေမှ ဆိုသလိုပေါ့အေ.. ကိုတင်အောင်များ မလှုပ်ရဲအောင် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆုံးမထားတယ်..ငါ ဝဝလာတာ ခပ်ကောင်းကောင်းသိလား.. ဗလ ကသူ့ထက်သာတော့ တစ်ချက်ကိုင်ဆောင့်လိုက်တာနဲ့ ငြိမ်ကျသွား စေရမယ်..” ဆိုပြီး သူ့စကားသူ သဘောတကျ တစ်ခွိခွိ ရယ်နေပါလေရော..ကျွန်မကတော့ အမြဲသူနဲ့ ဆန့် ကျင်ဘက် ပြန်ပြောလေ့ရှိလို့ ကျွန်မတုို့ နှစ်ယောက် သိပ်အစေး ကပ်လှတယ်ရယ် မဟုတ်ဖူး။
နောက်ဆုံး ပိတ် “ ဒီမယ်... ညည်းသာလေ..ယောင်္ကျားကိုဘုရား ထူး သားကိုသခင်ထူးနေ..ကျုပ်တော့ အဲလို မလုပ်နုိုင်ပေါင်..လင်ကြောက်တဲ့မိန်းမ အထဲ ခင်မတို့ မပါ ဘူးအေ့” ဆိုပြီး အနိုင်ပိုင်းစကားအဆုံးသတ်လေ့ရှိတယ်။ ကျွန်မ ပြုံးရုံသာပြုံးကျန်နေခဲ့မိတယ်.။ ခက်လဲခက်တဲ့ ခင်မရယ် .. စာဖတ်ပါဆိုတော့လဲ စာဖတ်ဖို့ အချိန်မရဘူး တဲ့.။ ကောင်းပြီ စာမဖတ်ရင်လဲ တရားလေးတစ်ပုဒ်တော့ နာဖြစ်အောင်နာဆိုတော့လဲ အခုမှ လေးဆယ်တောင်မပြည့်သေးတာ ငါက ဘာလုို့နာရမှာလဲ ဆိုပဲ.။ သူ့ယောင်္ကျား ကိုတင်အောင် ကတော့ မယက လို့ ရပ်ကွက်ထဲနာမည်ကြီးနေတာကို မမှုသလုို ခပ်ပြုံးပြုံး ခပ်အေးအေး နေလေ့ရှိသူပါ.။
လိုက်လဲလိုက်တဲ့လင်မယားပါပဲ။ တစ်နေ့တော့...ခင်မတစ်ယောက် ငိုကြီးချက်မနဲ့ ကျွန်မဆီ ရောက်လာပါတယ်.။ ကြည့်ရတာလဲ အတော်လေးကို ဝမ်းနည်းပြီး ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်နေပုံပါပဲ.။ “ကိုတင်အောင်မှာ နောက်တစ်ယောက်ရှိနေပြီ အေ့.. ငါဘာလုပ်ရမလဲ သူငယ်ချင်းရယ်.. ကယ်ပါအုံး..ကလေး ၃ယောက် ကိုမှအားမနာ ဒင်းမို့လုပ်ရက်တယ်ဟယ်..”
ကြားရတာ ကျွန်မရင်ထဲ မှာ အပူကူးပြီး ခင်မနီးပါးကျွန်မ စိတ်မချမ်းသာပါဘူး..။ “ ခင်မရေ.. ကိုယ်ပြောဖူး တဲ့စကားတွေ ခင်မမေ့နေလို့ ပါ..။အမြဲတမ်းခင်မကို ကိုယ်သတိပေးခဲ့တယ်။ သူတို့ တရားဝင် လက်မထပ်ရသေးဘူး ဆိုရင်နောက်မကျပါဘူး ခင်မရယ်။ အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ယောင်္ကျားကို တက်မက်မိတဲ့ မိန်းမတိုင်း သူတို့ အခြေအနေကိုသူတို့ နားလည်မှာပါ။ ခင်မသာ စိတ်ကိုအေးအေးထားပြီး ကိုယ် ပြောသလိုလေး လိုက်လုပ်ကြည့်ပါလားဟင်”
” ငါဘာလုပ်ရမလဲ.. အခုချက်ချင်းပြေးပြီး အဲကောင်မ ကို ပါးဆွဲရုိုက်ချင်တာပဲ ရှိတော့တယ်အေ ”
” အိုး..ဘယ်တော့မှ မလုပ်ပါနဲ့ ခင်မရယ်.. ကိုယ့်လူကိုယ်သာ နိုင်အောင်ထိန်းရမှာပေါ့..။ သူက ခင်မနဲ့ မဆိုင်သလို ပိုင်လဲ မပိုင်ဘူးကွယ်..။တော်ကြာ တရားစွဲတာတို့ ရဲတုိုင်တာတို့ ဆိုခင်မပဲ ကလေးတွေ ထားပြီးပြဿနာ ရှင်းရမှာမဟုတ်လား.။ ကို်ယ်ပြောတဲ့အချက်အတိုင်း နေထုိုင်ကြည့်ပါ သူငယ်ချင်း.. ကိုတင်အောင်ကြီး အိမ်မြဲ ပြီး စိတ်ပြန်လည်လာမှာပါနော်.။ ခင်မရေ.. စိတ်ကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဖြစ်အောင်တရားလေးတစ်ပုဒ်လောက်နာ လိုက်ပြီး တရားမှတ်လို့ ရရင်မှတ်နေပါ.။ ကိုယ်စာနဲ့ ရေးပေးလိုက်မယ်.. ခင်မ စာဖတ်မပျင်းနဲ့ တော့နော်.။ ”
၁ .။ လင်ယောင်္ကျား အပေါ် အတတ်နိုင်ဆုံး စကားကုိုချိုသာစွာ ပြောဆိုပါ..။
၂..။နုို့ စို့ ကလေး အရွယ်မှလွဲ၍ အိပ်ရာသီးခြားခွဲသိပ်ပါ. ။( ဖြစ်နိုင်ရင် လင်မယား ၂ ယောက် ထဲသာသီးသန့်အိပ်စက်သင့်ပါတယ် )
၃..။ အချိန်ရလျင်ရသလို စာဖတ်ပါ.။( စာဖတ်ခြင်းကြောင့် ဗဟုသုတ တိုးပြီး စိတ်ခွန်အားရစေပါတယ်)
၄..။ လတ်တလောခြေလှမ်းပျက်နေသောလင်ယောင်္ကျားအား မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းမပြု ပဲ အသာစောင့်ကြည့်ပါ.။( လင်ယောင်္ကျားဘက်က မည်သည့်အကြောင်းအရာမှ ဖွင့်ဟခြင်းမရှိသေးသရွေ့ မိမိသိနေ ရိပ်မိနေကြောင်းမပြပါနှင့် )
၅..။ ယခင်ကထက်ပို၍ လေးလေးစားစားဆက်ဆံပါ.။ ဂရုတစို်က် ကြင်နာယုယပါ.။
၆..။ မိမိကိုယ်ကို မိမ်ိ ငယ်စဉ်က ကဲ့သို့ သပ်ရပ်စွာ ဝတ်စားပြင်ဆင်ပါ.။ ( အလွန်အကျွံ အလှအပ ခြယ်သခြင်းကိုမဆိုလုို ပါ .။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်သန့် ရှင်းသောအဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ပါ)
၇..။ အလွန်ပူလောင်သောပရိဒေဝ မီးတစ်မျီုးလောင်မြိုက်နေ မည်ကို ငြိမ်းသတ်ရန် တစ်နေ့ အနည်းဆုံးတရားဓမ္မ တစ်ပုဒ် နာပေးပါ..။
၈..။ သားငယ် သမီးငယ်များကို ယခင်ကထက်ပို၍နွေးထွေးကြင်နာစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံ ဂရုစိုက်ပေးပါ.။ ( မိမိဘဝတွင်လင်ယောင်္ကျားထက်အရေးကြီးသော သားငယ်သမီးငယ်များအား လင်ပူကြောင့်လစ်လျုရှုမိသလိုမဖြစ်ပါစေနှင့်)
၉..။ အချိန်အနည်းငယ်ရ လျင် လှလှပပဝတ်စားပြင်ဆင်၍ သားသမီးများနှင့်ဖြစ်စေ..သူငယ်ချင်းအဖော်နှင့်ဖြစ်စေ အပြင်ထွက်လည်ပတ်ခြင်းစကားပြောခြင်း ပြုလုပ်ပေးပါ..။ အလုပ် လုပ် ကိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိပါက လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ပါ .။
၁၀..။လင်ယောင်္ကျားနှင့်လတ်တလောပက်သက်နေသောမိန်းကလေး ၏သတင်းကို အစရှာဖွေ စုံစမ်းခြင်း ကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ပါ.။ ( အကျိုးမရှိပါ..တကယ်ကျူးလွန်သူမှာ မိမိလင်ယောင်္ကျားသာဖြစ်ပါသည်။ သင့်ခင်ပွန်းစိတ်နှလုံးကိုသင့်ဆီပြန်လည်လာအောင်လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြီးစွာသောအနှောင့်အယှက်မှာ တစ်ဖက်မိန်းကလေးအားအမျိုးမျိုးစုံစမ်းဆက်သွယ်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်.။)
၁၁ ..။ သင်နှင့် သင့်ခင်ပွန်းနှစ်ယောက်ထဲ ရှိနေချိန်မျိုး ရအောင်ဖန်တီးယူပါ.။ သာယာသောအခြေအနေ မျိုးဖြစ်ပါစေ.။
၁၂..။ သင် ဘယ်လောက် ခင်ပွန်းလင်အပေါ်ချစ်ကြောင်း ..သိအောင် အပြုအမှု အပြောအဆိုအားဖြင့် အသိပေးပါ.။
၁၃..။ သင့်ခင်ပွန်းဂုဏ်သိက္ခာ ကို သင့်အသက်လိုကာကွယ်ပေးပါ.။ ( ဖောက်ပြန်မှု သတင်းကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချရသူ အနည်းငယ်မှတစ်ပါး မည်သူ့ ကိုမျှ လိုက်လံမပြောကြားသင့်ပါ )
၁၄ ..။ မည်သည့်အကြောင်းကိစ္စ ကိုမဆုို စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စွာထားတတ်အောင် တရား ထိုင်ခြင်း.. အိမ်မှုကိစ္စ အဝအဝ ပြုလုပ်နေစဉ် သတ်ိလေးကပ်၍ တရားမှတ်ခြင်း မကြာခဏ ပြုပေးပါ.။ ( တည်ငြိမ် သော မိန်းမသားတိုင်းကိုယောင်္ကျားတိုင်းလန့် လဲလန့်တယ်လေးလဲလေးစားမှု ရှိတယ်.. တစ်ခွန်းဆိုတစ်ခွန်းဆိုသလောက်စကားအရာမှာအောင်နုိုင်မှု ရနုိုင်ပါတယ်)
“ဒါပါပဲ ခင်မရေ.. စိတ်ချပါ ထူးမှာပါနော်..စိတ်တော့ရှည်ရမယ် သူငယ်ချင်း..တို့မိန်းမသားဘဝ က အရှုံးချည်းပဲမဟုတ်လား..။
အဲဒီအရှုံးတွေ ထဲ ကမှအမြတ်ထွက်အောင် နေတတ်ပြောတတ် မှဖြစ်မယ်”
“ခင်မပြောင်းလဲမှုကို ကိုတင်အောင်ကြီး အသဲမမာနုိုင်ပါဘူးကွယ်.။ သံယောဇဉ်ဆိုတာ အစဉ်သဖြင့် နွေးထွေးစေတဲ့ အရာပါ..။ ပြီးတော့ တို့ ဇနီးမယား ဆိုတာ လင်ယောင်္ကျားရဲ့ မိခင် နဲ့ ညီမ ပေါင်းစပ်ထားသလိုမို့ .. သားကို အမေကခွင့်လွှတ်သလို ..အစ်ကို ကို နှမက ခွင့်လွှတ်သလို ခွင့်လွှတ်ပေးတတ် ကြသူများပါ.။ စိတ်အေးအေး ထားပြီး အတတ်နိုင်ဆုံးခွင့်လွှတ်ပေးကြရအောင် နော်..သားတို့ သမီးတို့ ရဲ့ အဖေမဟုတ်လား သူငယ်ချင်း”
စိတ်အနည်းငယ် ငြိမ်ချမ်းသွားတဲ့ ခင်မ ကို ကြည့်ရင်း ကျွန် မဆုတောင်းပေး မိတယ်။ ဒီလိုပြသနာမျိုး ကျွန်မအောင်မြင်စွာ ကျော်ဖြတ်နုိုင်သလို သူငယ်ချင်း ခင်မလဲ ကျော်ဖြတ်နုိုင်ပါစေ... လို့
အာဆီယံ အမျိုးသမီး ချန်ပီယံရှစ် အဖွင့်ပွဲ မြန်မာအသင်း ဂိုးပြတ်နိုင်
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပနေသာ အာဆီယံ အမျိုးသမီး ချန်ပီယံရှစ် ပြိုင်ပွဲ၏ အုပ်စု(က) အဖွင့် ပွဲစဉ်တွင် မြန်မာအသင်းက ဖီလစ်ပိုင် အသင်းအား သုံးဂိုးပြတ် အနိုင် ရရှိခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ ချုပ်က သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မြန်မာအသင်း၏ အဖွင့်ဂိုးကို ပထမပိုင်း ပွဲအစ ငါးမိနစ်တွင် စန်းစန်းမော်က ၁၈ ကိုက်စည်း အတွင်း ဒိုက်ဗင်ထိုး ၍ ခေါင်းတိုက် သွင်းယူ ပေးခဲ့သည်။ ပွဲချိန် ၃၈ မိနစ်တွင် ဖိလစ်ပိုင် နောက်ခံလူ အမှားမှ တစ်ဆင့် ရရှိလာ သည့် အခွင့်အရေးကို နီလာမြင့် အပိုင် အသုံးချ နိုင်ခဲ့သဖြင့် မြန်မာအသင်း ပထမပိုင်းတွင် ၂-၀ ဖြင့် ဦးဆောင်ခဲ့ သည်။
ဒုတိယပိုင်း ပွဲချိန်(၈၂) မိနစ် အရောက်တွင် သန်းသန်းထွေး ပေးပို့မှုကို ရီရီဦးက ဂိုးဧ ရိယာထဲ ဆွဲဝင် ကန်သွင်းယူရန် ကြိုးစားခဲ့ရာ ဖိလစ်ပိုင် နောက်တန်းလူက ဥပဒေပ ဖျက်ထုတ် ခဲ့သောကြောင့် မြန်မာအသင်း ပင်နယ်တီ ကန်ခွင့် ရခဲ့သည်။ယင်းပင်နယ်တီကို စန်းစန်းမော်က အမှားအယွင်းမရှိ ကန်သွင်းယူသ ဖြင့် မြန်မာအသင်း (၃-၀)ဂိုးဖြင့် ဂိုးပြတ် အနိုင်ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပသည့် ၂၀၁၂ အာဆီယံ အမျိုးသမီး ချန်ပီယံရှစ် (AFF Women's Championship 2012) ပွဲစဉ်ကို စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှ စတင် ကျင်းပလျှက် ရှိရာ မြန်မာအသင်းအနေဖြင့် ဒုတိယပွဲစဉ် အဖြစ် စက်တင်ဘာ ၁၅ရက်နေ့တွင် စင်ကာပူနှင့် ဆက်လက် ရင်ဆိုင် ရမည် ဖြစ်သည်။မြန်မာအသင်းသည် အုပ်စု(က)တွင်အိမ်ရှင် ဗီယက်နမ်၊စင်ကာပူ၊ဖိလစ်ပိုင် တို့နှင့် အတူ ကျရောက် နေသည်။
မုံရွာမြို့လက်ပန်တောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း ရပ်တန့်ဖို့ ဒေသခံ တောင်သူတွေရော လယ်သမားတွေရော ပြည်သူ့အကျိုးဆောင် ကွန်ယက်ကပါ ထိန်းသိမ်းခံရာက လွတ်လွတ်ချင်း ဆက်တိုက် ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက် နေပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ ဦးပိုင်လီမီတက်ကတော့ ဒီ စီမံကိန်းကို ရပ်တန့်ဖို့မရှိဘူးလို့ တုန့်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လို့ ဒေသခံတွေနဲ့ ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရ ညိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ရိုက်တာသတင်းဌာနက ပေးပို့တဲ့သတင်းကို ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ဆက်ပေးမှာပါ။
ဒေသခံ လယ်သမားတွေက စီမံကိန်းရပ်ဖို့ အတွက် ဆန္ဒပြကန့်ကွက်နေကြပေမယ့်လို့ သူတို့အနေနဲ့ကတော့ ဥပဒေ စည်းမျဉ်းအတိုင်းပဲ သူတို့ စီမံကိန်းကို ဆက်ပြီး လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ ကြေးနီတောင်သတ္တုတွင်း စီမံကိန်း တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောလိုက်တာပါ။
စစ်တပ်ပိုင် စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမီတက်နဲ့ တရုတ်အမျိုးသားပိုင် မြန်မာဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတို့ ပူးတွဲပြီးတော့ လုပ်တဲ့ လက်ပန်းတောင် တောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် သူတို့လယ်ယာမြေတွေ ဆုံးရှုံးသလို၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ လယ်သမားတွေဖက်က ဒီ စီမံကိန်းကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ နေခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီ စီမံကိန်းကို ဦးဆောင်လုပ်တဲ့ စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမီတက်ဟာ အရင် စစ်အစိုးရကာလမှာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအတော်များများကို အခွင့်ထူးခံ လက်ဝါးကြီးအုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်လို့ အများက တွက်ဆ ထားတာပါ။
ဒါ့အပြင် အခုနောက်ပိုင်း အရပ်သားအစိုးရတက်လာပြီးနောက် ဦးပိုင်လီမီတက်ကို စစ်တပ်က တိုက်ရိုက် ကိုင်တွယ် စီမံနေတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း အခု လယ်သမားတွေရဲ့ ကန့်ကွက်မှုဟာ ထိရောက်မှုရှိနိုင်ပ့ါမလား စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။
တဖက်မှာလည်း အရပ်သားအစိုးရလက်ထက် လွတ်လပ်ခွင့်အချို့ရှိလာတော့ လယ်သမားတွေအနေနဲ့ အခုလို မကျေမနပ်ဖြစ်မှုကို ထုတ်ဖော် ဆန္ဒပြခွင့်ရှိ လာတာကြောင့် အခု ပြဿနာကို အများပြည်သူက ပိုပြီး သိရှိခွင့် ရလာပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အခုလို ဆန္ဒပြမှုတွေကြောင့်တော့ သူတို့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေ ရပ်တန့်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ဦးပိုင်လီမီတက်ရဲ့ ကြေးနီသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်သူ ဦးမြင့်အောင်က ပြောပါတယ်။
“စီမံကိန်းသည် ရပ်လို့မရပါဘူး။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အကျိုး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအကျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ရပ်လို့မရပါဘူး ဆိုတာ လူကြီးတွေကလည်း ရှင်းပြပြီးပါပြီ။ ကျနော်တို့ကလည်း ရှင်းပြပြီးပါပြီ။ သူတို့လိုအပ်ချက်ကို အဆင့်ဆင့် တင်ပြပြီးတော့ တောင်းဖို့ပဲရှိတယ်။ ညှိနှိုင်းပြီးမှ ဆက်လုပ်ပါဆိုတဲ့ဟာသည် မရနိုင်ပါဘူး။”
စီမံကိန်းကို ရပ်တန့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမယ့် တဖက်မှာတော့ ကျေးရွာသားတွေရဲ့ နစ်နာမှုအပေါ်မှာ သူတို့ဖက်က အဖြေတစုံတရာရအောင် ညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဦးပိုင်လိမီတက်က တာဝန်ရှိသူ ဦးမြင့်အောင်က ပြောပါတယ်။
လုပ်ပင်လုပ်ငြားသော်လည်း ဒီဟာတွေကို ဖြစ်စေချင်တာကတော့ ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းလေးနဲ့ ပြေလည် စေချင် တာပေါ့။ ပြီးရင် ဥပဒေဘောင်အတွင်းကပဲ တရားဝင် တင်ပြပြီးတော့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရင်တော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကောင်းတာပေါ့။”
ဆန္ဒပြလယ်သမားတွေဖက်ကတော့ သူတို့နစ်နာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တဲ့ လယ်မြေတွေအတွက် နစ်နာကြေးပေးလည်း လက်ခံမှာမဟုတ်ပဲ၊ ဒီ စီမံကိန်းကိုပဲ ရပ်တန့်ဖို့ လိုလားတယ်ဆိုပြီး ကျေးရွာပေါင်း ၂၆ ရွာက လယ်သမားတွေက တနေ့ကပဲ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီ စီမံကိန်းကြောင့် လယ်မြေ ဆုံးရှုံးရတာ တင်မဟုတ်ပဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်နွမ်းပြီး ဒေသခံ တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်စေတယ်လို့ သူတို့က ပြောပါတယ်။
ဒီစီမံကိန်းကြောင့် လယ်မြေဧကပေါင်း ၇၈၀၀ ကျော် သိမ်းဆည်းခံခဲ့ရတယ်လို့လည်း လယ်သမား တွေက ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မုံရွာမြို့ပေါ်အထိ လယ်သမားတွေ အခြားတတ်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ စုဝေးပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။
ဒီ့အတွက်လည်း အာဏာပိုင်တွေနဲ့ တင်းမာမှုဖြစ်ခဲ့ပြီး ကြားကနေ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအချို့က ၀င်ရောက် ညှိုနှိုင်း ပေးနေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လယ်သမားတွေ လိုလားချက်ဖြစ်တဲ့ စီမံကိန်း ရပ်ဖို့ အခြေအနေ ကတော့ အလှမ်းဝေးနေဆဲလို့ ပြောရမှာပါ။
အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အဆိုအရတော့ တရုတ်ဖက်က ကုမ္ပဏီဟာ တနှစ်ကို မြေ ၀.၄ စတုရမ်းမိုင်ကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၅၀၀ နဲ့ အစိုးရကို ပေးပြီး ငှားရမ်းထားတာလို့ သိရပါတယ်။
ပြည်သူလက်မခံသောစီမံကိန်းများ ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်မည်မဟုတ်ဟု ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောကြား
ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ မဂျွယ်ခန်းမ၌ ယနေ့နံနက်မှ စတင်၍ ကျင်းပလျှက်ရှိသော မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ရေးရပ်တန့် မှုတစ်နှစ်ပြည့်အဖြစ်ကျင်းပသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဟောပြောပွဲ တွင် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှ ကိုမင်းကိုနိုင်မှ နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်သူများ လက်မခံသော စီမံကိန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန် တောင်းဆိုပြောကြား ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ကိုမင်းကိုနိုင်က “ဘာစီမံကိန်း ပဲလုပ်လုပ်။ပြည်သူတွေအတွက် ဘယ်လို အကျိုးရှိတယ်လို့ပဲ ပြောနေပါစေ။ ပြည်သူတွေက လက်မခံတဲ့ စီမံကိန်းတွေဆိုရင်တော့ ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဥပမာ အနေနဲ့ ခြံစည်းရိုး ကြက်ဆူပင် စိုက်တာတောင် ပြည်သူကလက်မခံတဲ့ အတွက် မအောင်မြင်ဘူးဟု ထို ဟောပြောပွဲ သို့တက်ရောက်လာ သူများ အားပြောကြားသည်။
ထို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဟောပြောပွဲအား နံနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၅နာရီထိ စီတာပူ ရပ်ကွက်တွင် ရှိသော မဂျွယ်ခန်းမ၌ ကျင်းပသွား မည်ဖြစ်သည်။
လတ်တလောအားဖြင့် မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင် အနီးရှိ ကျေးရွာများမှ ဒေသခံလူဦးရေ တစ်ထောင်ကျော်တက်ရောက်ကြောင်းနှင့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်း သားများ အဖွဲ့မှ ကိုမင်းကိုနိုင်၊
ကိုဌေးကြွယ်၊ကိုပြုံးချိုတို့အပြင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်များဖြစ်သော ဦးဝင်းမျိုးသူ (Ecodev)၊ ဦးညိုမောင်၊ ဒေါက်တာ ခင်နီနီသန်း ( WRTC )၊ဒေါက်တာဦးထွန်းလွင် ၊ဒေါက်တာ ကျော်သူတို့မှ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ ဟောပြော ပို့ချလျက်ရှိ ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ငါးနှစ်ပြည့်နှစ် ပတ်လည်အခမ်း အနားကို စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် အဆိုပါ တော်လှန်ရေးတွင် အကျဉ်းကျခံခဲ့ရသော ဆရာတော် ဦးကောဝိဒက ဦးဆောင်ကျင်း ပမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းအခမ်းအနားဖြစ် မြောက်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးကပြောသည်။
“အခမ်းအနားမှာ သံဃာအပါး ၂၀၀ လောက်ကို ဆွမ်းကပ်မယ်။ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သမယ်။ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ကာလက ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားတွေ၊ ဗကသက လူငယ်တွေလည်း ပါဝင်ကြမယ်” ဟုအဆိုပါ ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်တစ် ဦးကပြောသည်။
မူလက ယင်းအခမ်းအနားကို ငွေကြာယံကျောင်းတိုက်တွင် ပြုလုပ်ရန်စီစဉ် ထားသော်လည်း ဧည့်ပရိသတ် မဆံ့မည်စိုးရိမ်ခြင်းနှင့် ငွေကြာယံကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ကြီးမှာနိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာ ယက အဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ် ခြင်းကြောင့် ရွှေဝါရောင်တော် လှန်ရေးတွင် အကျဉ်းကျ ခံခဲ့ရသူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ၏ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ ၇ ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံလမ်းရှိ ဇေယျ သိဒ္ဓီတက္က သီလာမဟာ သတိပဌာန် ကျောင်းတိုက်၌်ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
ဆရာတော်ဦးကောဝိဒမှာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ထောင်ဒဏ် ၁၁ နှစ် အကျဉ်းကျ ခံခဲ့ရပြီး ၃ နှစ်ခန့်အကြာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။
“၈ လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်တုန်းက လည်း အစိုးရအဖွဲ့တွေကို ပွဲလုပ်ခွင့်မတောင်းခဲ့ဘဲ တစ်ပြည်လုံး လုပ်ခဲ့ ကြတာ ဆိုတော့ အခုဒီပွဲကိုလည်း ဘယ်ကိုမှ တင်ပြထား တာတော့မရှိပါဘူး။
ရိုးရိုးဆွမ်းကပ်၊ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့ရုံပါပဲ” ဟုအခမ်းအနားဖြစ်မြောက်ရေးမှ
မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဖြစ်ပ...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြံ့ ခိုင်ရေး ဘာကြောင့်ရ...
""ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမြဲ အားကိုးနေရန် မဖြစ်ဟု ...
နေပြည်တော်၌ MPU စနစ်အတွက် Recovery Center ဆောက်လုပ...
မြန်မာမိန်းကလေးများ ကိုယ့်ကိုကို တန်ဖိုးထားတတ်ပြီ...
အာဆီယံ အမျိုးသမီး ချန်ပီယံရှစ် အဖွင့်ပွဲ မြန်မာအသင...
ပြည်သူလက်မခံသောစီမံကိန်းများ ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်မည...